ब्लग — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
यात्रा गरेको नवीनतम एल्बम बाट लागि मीठा विजय भिडियो जाँच, उठेर
"यात्रा गरेको एक पुस्तक मलाई लाग्छ कि हरेक जवान व्यक्ति पढ्न आवश्यक लिखित. येशूको लागि आफ्नो आवेग र यो पुस्ता हरेक पृष्ठमा चर्को र स्पष्ट मार्फत आउँछ. म यो सन्देश उद्देश्य लागि भोक भन्ने एक पुस्ता मा छ प्रभाव हेर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन। "- Lecrae, Grammy awarding- कलाकार @lecrae विजेता "उदय हाम्रो संस्कृति को हृदय कब्जा एक अभूतपूर्व पुस्तक हो. म यसलाई उठाउनु बित्तिकै रूपमा म यो तल राख्न सक्छ. यात्रा तपाईँले वास्तविक हुन चुनौती, र देखाउँछ कसरी आज संसारमा एक युवा वयस्क आफ्नो जीवन बिताउन. ठूलो पढ्ने। "- शमू म, एनएफएल linebacker, मानवीय @thesamacho "यात्रा म कान्छो थियो जब म पढ्नुभयो थियो चाहनुहुन्छ पुस्तक लेखिएको छ. उहाँको आवेग, बुद्धि, र साना पुस्ता चुनौती इच्छा काम यात्रा र उहाँले हामीलाई सबै मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ काम मार्फत गरिरहेको परमेश्वरको एउटा नियममा छ। "- किर्क फ्रैंकलिन, Grammy पुरस्कार- विजेता र बहु-प्लेटिनम रेकर्डिङ कलाकार @kirkfranklin "म पढेर उदय प्रेम. यस पुस्तकमा धेरै पटक म Medi फेला- पृष्ठ माथि tating म तिनीहरूलाई पढ्न पछि. म प्रोत्साहित थियो, प्रेरित, र मार्फत सबै बाटो चुनौती. संस्कृति हामीलाई समय तर परमेश्वरले बर्बाद अपेक्षा ...
यात्रा नयाँ पुस्तक, उठेर, अब बाहिर छ! तल पुस्तक यूहन्ना Piper गरेको foreword पढ्नुहोस्. तपाईं पुस्तक-अर्डर पूर्व र थप Risebook.tv एक मा मुख्य कुरा को म यात्रा ली र आफ्नो किताबको बारेमा रुचि फेला पार्न सक्नुहुन्छ, उठेर, श्रद्धाको र सान्दर्भिकता को अन्योन्य छ. अमेरिकी संस्कृति मा सान्दर्भिकता मा उद्देश्य सामान्य छ. सुन्दर हर एक ठाँउ छ. Mack stiles भनेझैं, संसारमा मसीहीहरूले सबैभन्दा खडा मुट्ठी डर पर्छ; अमेरिकी गर्ने खडा भौं डर. यसको अर्थ हामी सुन्दर छैनन्. सान्दर्भिक छैन. तर श्रद्धाको मा उद्देश्य दुर्लभ छ. श्रद्धाको पुरानो महसुस. यो unexciting महसुस. यो शांत होइन. तर सबैलाई थाह, धेरै तल, श्रद्धाको गएपछि कि, मानव जीवन को सबै विभिन्न शो हुन्छ. दुब्लो. Glib. छिपछिपे. प्लास्टिक. खाली. अन्त मा, निरर्थक. हामी थप गरियो. "चिसो fickle छ, र हामी यसलाई "यात्रा ली को टोलीहरू शब्दहरू लागि बाँच्न सक्दैन. ठ्याक्कै. बाँच्न प्रयास गर्दै सुन्दर हुन भर्खरै, बस सान्दर्भिक हुन, कम छ. र यात्रा ली आवाज बाहिर रुन्छिन्, उठेर! त्यहाँ त हेर्न धेरै अधिक छ, थाहा, माया गर्नु, रमाइलो गर्न. त्यहाँ त ठूलो हो कि वास्तविकताहरु तिनीहरूले मजा कम गर्न सकिँदैन छन्. शब्दहरू "मजा" "विस्फोट" "बल" "पार्टी" मुर्ख ध्वनि ...
हे मान्छे! मेरो पुस्तक उदय जनवरी मा जारी छ 27 (अर्को हप्ता!) र म तपाईंको सहयोगको आवश्यकता. सडक टोली एक भाग हुन मद्दत र हामीलाई अनलाइन पुस्तक बारेमा शब्द फैलाउन मदत र आफ्नो सामाजिक मिडियामा सक्ने मान्छे को लागि हामी खोज्दै हुनुहुन्छ. तपाईं बाहिर किताबको बारेमा थप http मा जाँच गर्न सक्छन्://मेरो प्रार्थना RiseBook.tv परमेश्वरले यस पुस्तक हुनेछ र माथि प्राप्त गर्न हाम्रो पुस्ता चुनौती यसको सन्देश प्रयोग र प्रत्यक्ष. र तपाईंलाई पुस्तकको लागि हाम्रो सडक टोली एक भाग हुन साइन अप गरेर हामीलाई सन्देश फैलाउन मद्दत गर्न सक्छ. यहाँ यो कसरी काम गर्नेछ ... 1 - यहाँ लागू. हामीलाई तपाईंले बारेमा थप थाहा, तपाईं टोली एक भाग हुन चाहनुहुन्छ किन, र तपाईं सामाजिक मिडिया र हामीलाई अन्य अनलाइन लिंक साझा. मेरो प्रकाशक आवेदन समीक्षा हुनेछ र रोजेको यदि ...2- पुस्तकको एक अग्रिम प्रतिलिपि पढ्नुहोस्. तिनीहरूले तपाईं पढ्न पुस्तकको एक पीडीएफ प्रतिलिपि पठाउने.3- निजी फेसबुक समूह सामेल. तपाईं मेरो प्रकाशक देखि एक निजी फेसबुक समूह सामेल गर्न निमन्त्रणा प्राप्त. त्यहाँ, तपाईं आफ्नो साथीहरूसँग साझेदारी गर्न ठूलो सामग्री एक टन प्राप्त. छन् ...
म उच्च विद्यालय मा varsity बास्केटबल प्ले. त्यो एक पूर्ण साँचो बयान छ (तपाईं शब्द प्ले परिभाषित गर्न मलाई जबरजस्ती नभएसम्म). म एउटा सानो निजी विद्यालय उपस्थित, र तपाईं एक वरिष्ठ थिए यदि तपाईं varsity टोलीको एक ठाउँ पायो. म बास्केटबल को खेल प्रेम, तर म धेरै राम्रो यसलाई प्ले भन्दा यो हेर्दै छु. म खेलाडी chastise र कराउने "C'mon गर्न सक्नुहुन्छ!"सबै-तारे कौशल संग रेफरी मा. तर जहाँसम्म यो जान्छ रूपमा छ. मेरो स्कूल वास्तवमा क्रम स्नातक मा खेल खेल्दै बारेमा यो अनौठो नियम थियो, हुनत, त्यसैले म अनुरूप र हरेक शुक्रबार राति लाज मेरो टाउको रचनाहरू बाध्य भएको थियो. यो खडा सधैं घर खेल पूर्ण थिए. mine- तिनीहरूलाई को उत्साहित आमाबाबु र विद्यार्थी-धेरै साथीहरू टोलीमा समर्थन सम्म देखाए. दुःखको कुरा, तिनीहरूले म जस्तै शायद फरक धेरै रूपमा खेल बनेको. म समय समयमा गर्न Bleachers मा हुनेछ नजर, सबै मानिसहरू के सोच थियो सोच, विशेष गरी मेरो पिताजी. म त्यो हामी दुवै हेर्न बस थिए भनेर बुझे लाग्छ, तर म एक राम्रो बस्नुस् भयो. म वास्तवमा तल्ला मा बनाइएको मात्र समय थियो ...
म पन्ध्र वर्षको थियो र मेरो जीवन बाहिर भित्र गरिएका भइरहेको थियो. मेरो नाम र उपस्थिति परिवर्तन थिएन, तर मेरो बारेमा अरू सबै कुरा थियो. म एक पूर्ण बिभिन्न व्यक्ति म एक वर्ष वा दुई अघि भएको थियो भन्दा थियो. म मतलब छैन मान्छे कलेज र जाने नयाँ उपनाम र व्यक्तित्व संग आफूलाई पुनः सिर्जना जस्तै; म अर्थ महत्वपूर्ण कुरा मलाई भित्र मा गएका थिए. म एक मसीही भएका थिए. म नयाँ महसुस. म जिउँदो महसुस. म सुन्न गर्ने कुनै यो घोषणा थियो कि राम्रो लाग्यो, विशेष गरी मेरो सबैभन्दा नजिकको साथी र परिवारको. सबैलाई आनन्द मलाई-केही परिवर्तनको अलग प्रतिक्रिया, प्रतिरोध-तर एउटा कुराकानी अरूलाई सधैं मलाई उभिए छ. म निकै सम्मान कसलाई पुरानो मानिस संग कुरा थियो, मेरो जीवन शैली परमेश्वरको आदर लागि मेरो खेल योजना व्याख्या गर्न रोमाञ्चित, विशेष मेरो यौन शुद्धता. म यसको बारेमा शान्त हुन प्रयास, तर यो सधैं मेरो उत्तेजना पकड गर्न कठिन थियो. शब्दहरू एक अस्वाभाविक गति मेरो जिब्रो बाट leapt रूपमा, म जस्तै उहाँले रूपमा उत्साहित थियो कि अर्थमा पायो. उहाँले चुपचाप सुन्न खोजिरहेका थिए, तर आफ्नो अनुहार अभिव्यक्ति आफ्नो अघि प्रतिक्रिया ...
यहाँ यात्रा गरेको पाँचौं स्टूडियो एल्बम उदय लागि सबै गीत हो. प्रत्येक ट्र्याक लागि गीत हेर्न गीत शीर्षक क्लिक गर्नुहोस्. आनन्द र साथीसँग साझेदारी! 1. उठेर 2. मा रोशनी 3. Shweet 4. MANOLO फिट. Lecrae 5. तिमीलाई थाहा छैन 6. सबै खडा (Interlude) 7. सबै खडा 8. सुन्दर जीवन2(मेरो) 9. Insomniac फिट. एन्डी Mineo 10. केही नयाँ 11. लाजरस फिट. This'l 12. सबै मेरो प्रेम फिट. नेटली लरेन 13. म गईसकें 14. मीठो विजय फिट. Dmitri McDowell र लेआ स्मिथ
हुक: (Dmitri) म पायो कारण मीठा विजय कसैले म पायो मीठा विजय Cause मलाई देखि यो लाग्न सक्छ म जहाँ मेरो मुकुट म कमजोर हुनेछु थियो thorns महसुस तर म हाँ म बाँच्न छौँ सुरुतिर सम्म धूलो देखि जीवित छु, मीठो विजय हाँ पद 1: तपाईंले मलाई limping हेर्न , म थाहा छ तिमी मलाई limping यी सीडी मा छैन बताउन सक्नुहुन्छ, तर ब्रो म यसलाई गहिरो गोडा छु म मेरो कमजोरी मा wading छु, उहाँले मलाई म आँसु मेरो शरीर सात वर्ष लागि सही काम गरिएको छैन नजिक छु यी रेखाहरू लेख्न रूपमा समेत त्यसैले मलाई सम्झना म बाटपुनपठाइएको छैन भन्न म मेरो दाँत मार्फत झूट हुन चाहन्छु निर्भर गरे "राख्न आफ्नो चिउँडो अप Bruh मुस्कान गर्न "प्रयास म छु बीस-छ, म एक माइल अझ राम्रो आफ्नो सबै उपाख्यानों र प्यारा उद्धरण राख्नुहोस् महसुस गर्नुपर्छ म साँचो आशा लागि clichés मा पारित छौँ, उहाँले पनि मदहोश हुक पोस्ट हुक छ: राजा गर्न टोस्ट, छत गर्न चियर्स हामी समाप्त मीठा विजय यसलाई बनाउन Gon 'राम्रो महसुस मलाई सुन्न, हामी मीठा विजय Cause हामी विजेता limping हुनत holla तिमी मलाई महसुस भने हामी अझै पनि पनि चलिरहेको, हाँ तपाईंलाई थाहा हामीले winded तापनि विजेता ...
पद 1: यो मेरो मन मा केहि तपाईं एक क्षण पायो के? Soapbox स्वाग, म सिर्फ यो मा पायो म यी चेन मा भएको र म यो थाकेको छु (कार हल्ला) मलाई थाहा तपाईंले यी टायर दल्नु सडक तल रोते सुन्न, प्राप्त Gotta टाढा म मेरो भाग्ने भर्नको, म यो दिन 'म दासत्वबाट मा भएको Cause आफ्नो बेइमान झूट आफैलाई मुक्त गर्न प्रयास गर्छन् लाग्छ तर योग्य थियो एम उच्च प्राप्त, एम उच्च प्राप्त, मेरो शरीर मा एम उच्च Novacane प्राप्त, कुनै म तिनीहरू म नूनिलो छु भनेर भन्न झूट महसुस छैन र तिनीहरूले आलोचना गर्न सक्छन् तर म slaying लागि प्रार्थना छु, तपाईं गहिरो आवाज निकाल्नु अघि आफ्नो निधन लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दैन, र म हरुवा लुसिफरको पल्ट कुरा गईसकें छु मान्छे बताउन, तपाईंलाई थाहा गलत यदि यो म एउटा गीत मा तोड म तपाईं फोन मा तोड्न खडा छैन उहाँले गलत छ? हुक: तपाईं के भन्दै म सुन्न, तर म बस झूट हुन Cause तिमी विश्वास छैन, र म तपाईंलाई आवश्यकता छैन म एक नयाँ प्रभु पायो, मलाई थाहा म देख्नुभएन तर म मार्फत सही हेर्न, त्यसैले म निस्कनु Gotta (2X दोहोर्याउनुहोस्) पद 2: कति पटक मैले भन्नुहोस् Gotta के ...
परिचय: (नेटली) म हेर्दै हेर्न तपाईं के हेर्न चाहनुहुन्छ के? म एकल छु? खैर, sorta थोडे शायद के तपाईं मनमा छ गर्नुभयो? आफ्नो अनुहार वरिपरि हेर्दै अरू कसैले परिचित देखिन्छ म सबै समय हेर्न अनि म तपाईंलाई कम्पनी राती तपाईं कसैले बताउन Gotta छैन राख्न सक्नुहुन्छ छैन हाँ बस शब्द भन्न र तपाईं यसलाई दायाँ यहाँ पायो, अहिले पद 1: जे एक्लो थियो अनि उहाँले नेट मा प्रेम को लागि देख गर्नुपर्छ मानिसको आवश्यकता छ, के तपाईं आशा? उहाँले आफ्नो सबै पृष्ठहरूमा मार्फत देख्यो अनि उहाँले उसलाई मानिस फेला गर्दा उहाँले तिनीहरूले उहाँको हृदय कडा पिटाई त्यो थोडे प्रकाश skinned थियो भेट्दा यो पहिलो नजर मा प्रेम थियो Cause आफ्नो सास गुमाए, उहाँले तिनीहरूलाई तपाईं यस कठिन मारा जब तिनीहरूलाई भावना लड्न सक्दैन मनपराएका आँखा जस्तो लामो दूरी छ, त्यसैले उहाँले उनको अनलाइन उहाँले काम मा छ सबै समय तर यो केटी सबै उसलाई हेर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन समय आफ्नो मन मा छ, त्यो तिनीहरूलाई तिनीहरूले सँगै उहाँले आपत्ति बेला सुविधाहरू banging भयो उहाँले भिषा संग भुक्तानी Gotta उहाँको Homies उहाँलाई चेतावनी दिए "सुस्त महिला तपाईं पूरा गर्न सक्दैन भनेर" तर उहाँले छैन प्रेमको खेलमा छ ...
पद 1: केटा म गम्भीर शुभ प्रभात बाहिर hopped म धेरै लामो मलाई हेर्न प्रयास कुरा सबैजना yawning छु लागि सुतिरहेको गरिएको, उहाँले सास कसरी जस्तै अविश्वास? उहाँले थियो छ खुट्टा तपाईं के भन्दै गहिरो केटा? पर्ख आफ्नो मुख बन्द मृत मानिसहरू holla सक्दैन, के तपाईं पल्ट कुरा? 'यसलाई हिड्ने छैन भनेर ढोका मार्फत एक पटक कारण तर अब Ooh थाहा छ तिमी म धेरै लामो लागि गम्भीर मा भएको हावा Cause मा गंध म मान्छे रो कसम म हराइरहेको छु मलाई मेरो लाश राख्ने बाकस समय मा फिर्ता लिन गरौं, obituary मेरो अनुहार फिक्का लिखित गरिएको, तिनीहरूले आफ्नो केटा बताउन सक्दैनन् बन्द पुगेको गर्न बारेमा लाश राख्ने बाकस, को प्रचारक कल, उहाँले त गएको यो पूरा छैन कसैले उहाँलाई पुग्न सक्दैन, यति लामो समय भन्न तर मा पकड, तपाईं रुन र बाहिर चलान अघि म आ कोही सुने, यसो भन्दै कुरा चिल्ला, "बाहिर आउ" पूर्व-हुक: यो गम्भीर बाहिर अप Hopped, राम्रो म धेरै लामो म yawning छु लागि सुतिरहेको गरिएको बिहान तिनीहरू मा कालो सुट मलाई गाडे, कालो टाई म जीवित छु र म देख हुक मा अब देखि त्यसैले उड उठेँ: अब देखि तपाईं देखि मलाई लाजरस कल गर्न सक्छन् मा अब देखि मलाई लाजरस कल गर्न सक्छन् मा ...
परिचय / नमूना: पर्ख, पर्ख मलाई अर्को एक प्राप्त गरौं (4x दोहोर्याउनुहोस्) पद: केटा तपाईंलाई थाहा म तिनीहरूलाई पायो जे गरेको, मेरो खुट्टा को craze मा पकडे तिनीहरूलाई रक, मेरो कोठरी तपाईं जान्दछन् म तिनीहरूलाई पायो5का र म सिर्फ उनलाई 12 का पायो पूरा छैन तर तपाईंले तिनीहरूलाई थाहा म साँच्चै चाहन्थे 1 का बिक्री मा छ साइटमा त्यसैले एक जोडी थप क्लिक, म बस Bruh महसुस गरिरहेको छु सम्म म सबैलाई केहिपनि माइक सट्टा म जस्तै हुन सबैलाई तिनीहरूलाई homie म अब के मनपर्छ छैन भनेर पायो भने मेरो जुत्ता खेल तंग राख्न Gotta मेरो लत अज्ञात महिला वा Booze Sneakerheads छैन, म यो मेरो कार्ड राख्नुहोस् केही जूता को लागि खुजली छु, म कहिलेकाहीं गुमाउन केही पायो छैन म के म के म पायो यसलाई म यो पायो कि नयाँ केही थोडे फ्लू Cause म आदी छु पायो लाग्छ के छैन नयाँ कुरा wan't Cause प्रमाणित गर्न म चाहन्छु छ आश्चर्य मलाई Outro / नमूना जस्तै: डकैती जस्तै हाँ यो मलाई पायो, पर्ख मलाई अर्को एक प्राप्त गरौं (4x दोहोर्याउनुहोस्)
पद 1: म आज जाँदै छु यो मेरो मात्र गोली मेरो जीवन आज समाप्त सक्छ हाँ मेरो हृदय रोक म माथि बाहिर जाँदै छु आज राती बाहिर जाने भने म यो सबै जीवन दिन म पायो Yessir अब एक मिनेट bruh म प्रतीक्षा सबै छैन कि बिट बन्द लिन लागि उच्च प्रतीक्षालय आफ्नो हातले rocking y'all हेर्न, 808'स्ट्यान्डबाइ मा को म हल्लाउने Gon म बयान भन्न Bangers म जमीन द्वारा खडा कि सास छु जब जब कि बिट ड्रप, पहिरो कृपया मलाई बन्द गरौं मेरो पट्टा म यो महसुस, म यो महसुस, म के म किन भन्ने Bruh छु म वास्तविक हो जो एक गोरिल्ला जस्तै एक जनावर हुड मा त्यसैले म जा र मैले गइसकेको उदय र पीसने छु म आराम गर्न छौँ मा छु छु जस्तै धेरै राम्रो महसुस गरिरहेको छु छ म बिहान उठ भने बस सबै रात रहन्छ गीत आज राती म मेरो जीवन span जस्तै बन्द जाँदै छु लेखे, bruh म हुन हावा ठीक Throw सावधानी जाने हामी पल्ट कुनै धीमा जाने गरौं Gon छु, हामी जित्न Gon कुनै धीमा, हामीलाई थाहा छ उहाँलाई पूर्व-हुक brag: आज राती म यो सबै पालन अनि मेरो जीवन जस्तै जीवन बिताउन जोखिम छौँ ...
परिचय: ओह, म तिमीलाई माया गर्छु, हाँ जस्तै कुनै अन्य, हाँ म देख्दा तपाईं बस गर्मी जस्तै चमक मुस्कान, हाँ पद 1: तपाईंले तिनीहरूलाई शब्दहरू असफल हुँदा म भन्छु मेरो मिनी गर्न चाहन्छु के verbalize गर्न कठिन भन्ने भावना थाहा, मेरो सानो मान्छे बच्चा कुरा कुरा हुनुहोस्, म भन्दै हुन के थाहा छैन तर यो आफ्नो बाबाले गर्न बूम BAP जब म मां तिनीहरूलाई तपाईं राख्नु हुनत Polos र skinnies fro जंगली घुम्रेको नजिकै छु हुनत मेरो कान संगीत छ, तपाईं तिनीहरूलाई मिश्रित बच्चा स्वाग आफ्नो आमा र सीधा तपाईं वास्तविक ताजा कठिन म कराए थियो गर्भमा तिनीहरूलाई आफ्नो पिताजी जस्तै हेर्दै कि म त तपाईं एक मुस्कान राख्न भएकोले आँसु बाँकी छ छैन सम्म पायो हुनत तपाईं एक leer भन्दा उड्ने हुन मेरो अनुहार कुश्ती र नृत्य मा, ठाउँ हेर मा जंगली म मेरो नाम पायो थाहा तर म आफ्नो प्रसिद्धि लागि आफ्नो जीवित लगाएका चाहनुहुन्छ, म हुक प्रेम: ओह, म मेरो दृष्टि तपाईंलाई सुन्दर हुनुहुन्छ Cause स्पष्ट हुन सक्दैन कुनै कुनै तपाईं बस गर्मी जस्तै चमक मुस्कान देख्दा म कुनै अन्य जस्तै तपाईं प्रेम, यसलाई म गर्न सक्दैन तपाईंलाई मनपर्ने कुनै आश्चर्य छ ...
नमूना: हामी सबै खडा भने, ओह हाँ ओ हाँ (दोहोरिने) पद 1: मलाई थाहा म माइक ब्रो स्पर्श गर्न योग्य छैन तर यो शिल्प म अन्तिम समाप्त हुन सक्छ थाह यो कलम र एक प्याड संग प्रयोगशाला मा म छु लागि लड्न भनेर कुरा हो, कि साँच्चै छैन म '04 समय फिर्ता thoughLet गरेको गो लेख्न किन म भेट 116, चाँडै म छिटो अगाडी चार वर्ष बोर्ड मा थियो, भ्रमण मा हामी अनि हामी त्यो भण्डारमा थियो बस के थाहा छैन तर हामी अब यहाँ पछि दस वर्ष हो, प्रवाह पायो ठूलो बांड नजिक पायो, प्लस यसलाई हामी बस आटा लागि यो गर्न भन्दै थप शत्रुहरू छ, तर तिनीहरूले हामीलाई तोड्न छैन 'प्रभु हामी त्यो त दयालु छ अनि म यसलाई के किन तिनीहरूले मलाई सोध्नुभयो भने म तिनीहरूलाई यो एक आन्दोलन को संगीत छ बताउन प्रवाह संग सेवा कारण हाँ म मेरो unashamed चालक लागि बोल्ने छु त्यो कहिल्यै एक चरण स्पर्श तर तिनीहरूले आफ्नो हिँडिरहेका छौं पूर्व हुक उठेर: हामी भने मेरो सपना हामी सबै खडा गर्नुपर्छ हुन अनि उहाँले राम्रो छ हाँ राजा कारण लागि गणनामा हे दिन्छु upThat सबै वृद्धि, ओह हाँ अरे हाँ,...
परिचय / नमूना: केही दिन म यति नजिक महसुस अनि केही दिन यो यति भलाइ र कृपा टाढा पक्कै सधैं शून्य फर्कन पालना अनि कहिल्यै पर्छ देखिन्छ, ओह Hallelujah म खुसीसाथ सबै मेरो म सिर्फ सबै मेरो जीवन conveys कि म मतलब हरेक शब्द आशा दिन तपाईंलाई यो दिनेछौँ उच्चतम प्रशंसा हुनुको, तैपनि मलाई येशूले दुष्ट संग ooh, हे प्रभु, मेरो येशूले, म पद त तपाईंलाई मनपर्ने किन हो 1: केटा म मेरो चुनाव निश्चित गर्न चालु ग्लाइडिङ छु जस्तै महसुस, ओबामा Biden (यसलाई प्राप्त?) दैनिक म खलनायक हत्या मलाई भित्र homiciding छु, कहिलेकाहीं यो traumatizing छ (छैन यो छ?) तर म पालन छैनन् जब छु म उजागर गरिएको छ म यसलाई regretting गरिएको प्रतिज्ञा यसलाई जब म चढेर वाचा छु उहाँको वचन अपनाउँछन् यो मलाई आनन्द दिन्छ अचम्मको छैन bro, तर म उसलाई पर्यायवाचीशब्द मा छु: म एक तिनीहरूले छाया फालिएको एक प्वाल पायो जस्तै महसुस लुकाउने मा छु, तर म बिम छु म कारण पुत्र म खुला आँखाले सपना छु जस्तै महसुस, आकाश वृद्धि द्वारा ग्लाइडिङ अस्थायी मेरो मन, बादल9भन्ने ओजोन तह तह अरे म soaking छु मेरो समुद्र पौडी छ तर उहाँले म धूम्रपान सक्दैन छु पछि मेरो मुनि कि आगो रोशनी ...
हुक: म उठे बन्द बारूद कि पालो लागि यो गर्न र कुनै बर्नर पृष्ठ फ्लिप बारेमा म कुरा छैन लोड, म यसलाई MANOLO मा एक सानो घर भयो विस्फोट छौँ (nolo) MANOLO (nolo) MANOLO (nolo) MANOLO (2X दोहोर्याउनुहोस्) पद 1 (यात्रा): तिनीहरूलाई केटाहरू बताउन म मेरो कार मा एक राख्नुभएको नांद एक्लै Cause छोड्न कहिल्यै प्रयास र म घर तिनीहरूले विभिन्न प्रकार मा दुई पायो, तर तिनीहरू नै कुरा डबल किनारा गर्न, डबल बैरल, धमाका धमाका म बाहिर यहाँ ड्रेगन सामना छु, म मेरो प्राण लागि आ मेरो मन बाहिर छैन, त्यसैले उनीहरूसँग तिनीहरूले मलाई मार्न प्रयास निहित समय पल्ट छ, तपाईं मलाई विश्वास छैन भने म मतलब छैन, म मतलब छैन, म सजिलो म एक पृष्ठ flipping छु यसलाई लिन सक्दैन, म ट्रिगर-खुसी एक क्लिप र गजको यसलाई क्लिक छु, चरण मार सत्य तपाईंलाई हिट, हरेक वाक्यांश यसको उहाँले मलाई गहिरो म डाइभिङ छु कटौती, म त्यो आगो आगो पायो सवारी जब म मा डाइभिङ छु, म जीवित फेरि पद Hook छु2(Lecrae): MANOLO MANOLO, म बाहिर यहाँ हुलाक जाँदै छु मेरो साथी लाग्छ म यो गुमाए, मेरो आमा म हुनत मेरो शूटर नजिक राख्न LOCO छु लाग्छ, तपाईं यसलाई पूर्णतया छ थाहा ...
हुक: तिनीहरूलाई हात प्राप्त हावा मा तपाईं हिम्मत यदि तपाईं त्यहाँ Godman मा brag यदि खडा मा एक सानो हल्ला, तपाईं त्यो के भने तपाईंले घमन्ड गर्दा यो ट्याग संग लुगा पल्ट 'थिएन shweet गर्न चाहन्छु हिम्मत भने मात्र? त्यो के तपाईं घमन्ड उसलाई पल्ट थियो भने जसले पहिलो र अन्तिम हो shweet गर्न चाहन्छु? त्यो shweet गर्न चाहन्छु पोस्ट हुक: म तिनीहरू तातो मानिस बचाओ तिनीहरूलाई gassed भयो जस्तै कुरा तिनीहरूलाई सुने, कि octane हेर मैले तिनीहरूलाई बताउन तिनीहरूले एक छाता प्राप्त राम्रो छैन राम्रो छ घृणा, भगवान पद शासनकालमै 1: गरेको लेट eighties समय फिर्ता जाने डी शहर मलाई तल पकड, म त्यहाँ फिर्ता छु जब तिनीहरूले मलाई गरे जहाँ कि छ, म भाकाले-आईएनजी छैन (vacationing) जस्तै म घरमा महसुस, रहन सोचिरहेका, Ooh पहिले नै पहिले नै लोन तारा राज्य नस्ल हुनत म रहन छैन, म यो कसरी बिर्सन सक्छ तर उहाँले मलाई बुनना कसरी यो हो नीलो बाहिर उड पप छैन, म जुत्ता पल्ट कुरा छैन, गोली मार म समस्याहरू धेरै पायो तर म सीधा छु, मलाई थाहा shweet मेरा परमेश्वर ताल तिनीहरूलाई टस हुनेछ छ, कि shweet गर्नुपर्छ म कति पटक तपाईं बताउन Gotta ...
परिचय / नमूना ओह ओह, ज्योति हामी जा जहाँ थाहा छैन (दोहोरिने) पद 1: वरिपरि हेर यो सबै गाढा छ, यस लाख मानिस मार्च जस्तै सबै कालो सबै, तर म पल्ट सबै गाढा हृदय कुरा छु, गाढा प्रवाह लेखन गाढा प्राण गाढा मन म हुनत एक सानो प्रकाश प्राप्त गर्न सक्दैन? केहि म लागि लड्न सक्नुहुन्छ? हे हामी त अन्धा हामी जाने अगाडी पूर्ण गति जानुहोस् भनेर राजमार्ग मा थाहा छैन, उडान तर हामी कम तर हामी उहाँले भण्डारमा पायो बस के थाहा छैन, को okie doke लागि कुनै थप झर्ने होइन, उहाँले हामी कहिल्यै हल्का सम्म चमकिलो प्राप्त अघि 'देखे कुराहरू लागि हामीलाई दृष्टि दिन सक्छन्, हामी जाँदै जहाँ हामी थाहा छैन तर यो जीवन को लागि कुनै Google नक्सा छैन, र यो जस्तै हाम्रो हेडलाइट्स भाँचिएको प्रमाण हो हो: हामी चमकता, केही निकल र तामा लागि सुनको भन्ने केही धन मा पारित, हामी सबै सपना पायो के हामी अरे छरिरहेका चोरी कि महिमा प्राप्त गर्न प्रयास अनि reaping, यो म त्यो स्विच र चम्कने पल्टाउन छौँ भनेर प्रार्थना छु मेरो हो, बच्चाहरु अन्धो हो हामी थाहा छ तिमी यसलाई पायो, प्रभु हामी तपाईंलाई यो केवल तपाईं हामीलाई उच्च लाग्न सक्छ पायो थाहा, तपाईं पायलट रोशनी कृपया हामी Hook ...
हुक: हामी सबै मेरो एङ्कर त गएका गर्नुपर्छ मलाई सँगै जीवित आउन हेर्न उठ्नेछ जब हामी बलिरहेको झूट विरुद्ध खडा अनि म मेरो पखेटा फेला अब म उठेर जान तयार छु आज दिनको, हामी सबै ओह ओह ओह हामी सबै वृद्धि ओह ओह ओह आजको दिन उदाउने पद उठ्नेछ 1: पर्ख म एम मा पागल छु जस्तै यी ट्रयाक मा घमण्ड फिर्ता छु, फिर्ता हुन सक्छ थप्पड mics कहिल्यै मन तथ्यलाई आपत्ति म सुन्नुहोस् अप तपाईंलाई Gotta छैन मलाई सोध्न दुई पटक म यहाँ छु प्रचार छु कहिल्यै बायाँ म, मान्छे I'ma यसको लागि जाने निद्रामा घुर्नु बेला मेरो परमेश्वरले कुनै लोकगीत छ लागि म ज्ञात छु जस्तै उहाँलाई घमन्ड गर्न यहाँ छु, 'उहाँले वास्तविक कारण, उहाँले वास्तविक अब हात मा विषयमा म डिजाइनर थाहा, उहाँले हामी माथि उठ्नेछ र खडा हामीलाई बताउन एक cryer आवश्यक जब I'ma कसरी रिटायर एक पैन मा एक फ्लैश छ जसले म यो जीवन बताउन लेखन छु आफ्नो हातमा डिजाइन बादल मा उड पाइलटहरूले भन्दा उच्च छ? तिमिलाइ मेरो यार योजना जाँच, कि गम्भीर तपाईं भूमिगत बाटो निकै लामो भएको Cause आफ्नो घर छ वटा तपाईंको पत्थर मा मिति संग गहिरो तिनीहरूले भन्न सबै,...
उत्पादित: द्वारा अतिरिक्त आवाजहरु Gawvi: जे. द्वारा पावलले कलाकृति: एलेक्स medina मिश्रित र द्वारा महारत: याकूबले "बिज" मरिस पद 1: कसैले केहिपनि गर्नुपर्छ म तिनीहरूलाई टिप्पणी Twitter मार्फत flipping छु जब महसुस कसरी त्यो छु हाम्रो दुखाइ सुन्न छैन, म महसुस सबै वर्षा छ तिनीहरू यसलाई सामान कुनै थप अवस्थित छैन पुरानो हो भन्दा मलाई प्राप्त बताइरहेका तर coulda मलाई हुक भएको जस्तै म महसुस हुँदा यसलाई वास्तविक हो त्यसैले कि जब म यी सडकमा हेर्न साँचो घण्टी छैन: मानिस म तिनीहरूले म महसुस गरिरहेको छु कसरी अहिले म जस्तै यो coulda मलाई भएको म जस्तो coulda मलाई भएको हामी सबै परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि तपाईंलाई थाहा हाम्रो सबै जीवन फरक महसुस महसुस थाहा चाहन्छु म सही महसुस गरिरहेको छु कसरी अब आह तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो दृष्टि हामी दुखाइ कारण महसुस हामी अघि कसले निर्दोष छ मलाई थाहा छैन यहाँ भएको तर यसलाई coulda मलाई भएको म जस्तो coulda मलाई पद भएको महसुस भङ्ग छ 2: मलाई थाहा भएन माइक भूरा मलाई थाहा Trayvon म शन बेल थाहा थिएन छैन तर म तिनीहरूले गएको मलाई थाहा ओस्कार अनुदान वा Tamir चावल म एरिक गार्नर थाहा थिएन छैन थाहा तर म तिनीहरूले थाहा जीवन थप लायक छ तिनीहरूले भन्दा ...
मेरो हृदय भारी छ. मलाई थाहा परमेश्वरको राम्रो छ, र उहाँले नियन्त्रणमा भन्ने, तर मेरो हृदय भारी छ. फर्ग्यूसन मा भएको घटना पछि गत हप्ता (र सामाजिक मिडियामा यसलाई प्रतिक्रियाहरू), म एउटा गीत लेख्न बोझ महसुस. मेरो लक्ष्य कुनै पनि महान् बयान वा घोषणाहरूमा बनाउन थिएन, तर सबै कुरा मलाई महसुस गरे भनेर बाटो व्यक्त गर्न. त्यसैले म लेख्दै सुरु, र यो बाहिर आए के छ. मेरो मनमा दोहोऱ्याउनुभयो को भावना थियो: "यो मलाई भएको छु सकिएन।" म मसीहीहरूले यस्ता समयमा प्रतिक्रिया कसरी तयार पूरै पोस्ट थियो, तर हिजो एरिक गार्नर बारेमा समाचार पछि, म पछि प्रतीक्षा र पोस्ट निर्णय. अहिलेको लागी, म सिर्फ म एक भारी हृदय छ कि भन्न चाहनुहुन्छ. म अहिले बहस वा तर्क छैन रुचि छु. मैले मेरा चोट व्यक्त गर्न स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ. कि एरिक गार्नर भिडियो हेर्न तहसनहस छ किनभने म चोट छु. जब पहिलो मेरी श्रीमती र म यसलाई महिना पहिले हेर्नुभयो, हामी दुवै कराए. जीवन एक सुन्दर उपहार हो, र यो विचारणीय छ कि जीवन कसैको शरीर छोडेर हेर्न - यो अन्य मानिसहरूले लिएको गर्नुपर्छ विशेष गरी जब. मैले सोचें, "पक्कै पनि मान्छे सक्दैन ...
मेरो नयाँ पुस्तक, उठेर, बाहिर जनवरी 27 आउँछ! जहाँ पुस्तकहरू बेचिन्छ यो उपलब्ध हुनेछ. तपाईं अहिले अर्डर पूर्व र Risebook.tv मा पुस्तक वेबसाइट भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ. म प्रभु उठ मेरो पुस्ता प्रोत्साहन गर्न प्रयोग गर्नेछ प्रार्थना र बाँच्न. माथिको ट्रेलर हेर्न र तल पुस्तकको एक संक्षिप्त विवरण पढ्न: समाज भन्छन् युवा स्वतन्त्रित आत्म-अभिव्यक्ति लागि समय छ, तर यात्रा ली भन्छन् परमेश्वरको निदाउनु देखि वृद्धि गर्न सबैलाई भनिएको छ, कम आशा माथि, र बौरिउठ्नुभएको राजा लागि बाँच्न. विश्व हाम्रो प्रारम्भिक वर्ष irresponsibly भन्दा आनन्द उठाउन गर्न अर्थपूर्ण पेसामा समर्पित छन् भनेर हामीलाई बताउँछ. हामी जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता हो बोझबाट सकेसम्म लामो पन्छाउन गर्न बताए हुनुहुन्छ. र त्यसैले, हामी माथि प्राप्त गर्न बाध्य हुनुहुन्छ सम्म हामी भन्दा निदाउनु-सुतिरहेको जीवन मा एक दुःखी अवस्थामा हाम्रो युवा खर्च. समस्या जीवन पहिले नै शुरू भएको छ भन्ने छ. यो अहिले भइरहेको छ. अनि परमेश्वरले तपाईंलाई यो बाँच्न भनिएको छ. यो शक्तिशाली पुस्तकमा, यात्रा ली यसलाई उठ्नु समय र वृद्धि हो तर्क छ, हामी बाँच्न सिर्जना बाटो बाँच्न. युवा वा पुरानो, हामी उहाँलाई लागि बाँच्न भनिन्छ गरिएको छ. अहिले. युवा विश्वासीहरुका सामना ...
तपाईं यात्रा गरेको नवीनतम एल्बम लागि देखेका छौँ चित्रहरू आनन्द लिई, उठेर? तपाईं सबै समय यसलाई तपाईं सक्छ त त्यसपछि आफ्नो फोन को लागि यो shweet वालपेपर लो. डाउनलोड आईफोन वालपेपर
के विजेता जस्तै हेर्नुहुन्छ? तिनीहरूले अग्लो वा छोटो छन्? कालो वा सेतो? बलियो वा कमजोर? म यसलाई हामी मतलब द्वारा के निर्भर अनुमान "विजेता।" एक एक लामो पढ्न रूपमा म एक विजेता को कथा मा यो गत महिना चूसा थियो, तर माइकल जोर्डन को आकर्षक जीवनी. उहाँलाई धेरै मानिसहरूको obsession किन नायक उपासना मा सीमाहरु विस्तृत खाता मलाई सम्झना. धेरै कुराहरू बारे भने गर्न सकिन्छ "आफ्नो एयरनेस" तर कसैले कहिल्यै उहाँले एक विजेता छैन दावी सक्छ. उहाँले सबैलाई च्याम्पियनशिप छल्ले पायो अघि उहाँले एक विजेता जस्तै खोजे, हुनत? तपाईं पुस्तक पढ्न रूपमा, उहाँले एक च्याम्पियन हुनेछ भनेर आफ्नो बाल्यकाल देखि स्पष्ट देखिन्थ्यो. एउटा सानो लिग pitcher वा एक जुनियर varsity बास्केटबल खेलाडी रूपमा आफ्नो उल्लेखनीय प्ले थियो कि होइन; आफ्नो उच्च विद्यालय वृद्धि spurt वा आफ्नो खेल UNC आफ्नो freshman वर्षमा शट विजेता. समय द्वारा म एक शिकागो बुल रूपमा आफ्नो च्याम्पियनशिप बारेमा अध्याय मिल्यो, त्यहाँ कुनै आश्चर्य थिए. लेखक भनेर स्पष्ट गरे तरिकामा आफ्नो कथा भन्नुभयो: जोर्डन एक विजेता हुन जन्म भएको थियो. र के हामी उहाँलाई थाहा छ: छ च्याम्पियनशिप छल्ले विजेता, पाँच MVPs, र 14 सबै ...
एक जोडी महिना पहिले म एक ब्रान्ड नयाँ एल्बम घोषणा गरेर सबैलाई अचम्ममा, "बढ्छ।" तपाईंले यसलाई मेरो लेबल अघि यसको बारेमा शान्त राख्न कसरी गाह्रो थियो बुझ्दैनन् र म सार्वजनिक भयो. एल्बम एक वर्ष भन्दा लागि काम मा भएको थियो, र म सबैलाई बताउन प्रतीक्षा सकेन - विशेष गरी म केही नयाँ कुरा गिर थियो सोधेर राखिएको गर्नेहरूलाई. प्रतिक्रिया हालसम्म गहिरो उत्साहजनक भएको छ. म अन्तिम दुई वर्ष धेरै शान्त भएको छु तापनि म मान्छे मलाई समर्थन जारी गरेको छक्क छु. तपाईंको प्रेम र उत्तेजना मेरो मात्र बढेको छ. प्रारम्भिक सेवानिवृत्ति द्वारा म छक्क थियो प्रतिक्रियाहरू एक यो एक थियो: "प्रतीक्षा, म सेवानिवृत्त लाग्यो?"यो एक छाया जस्तै मलाई वरिपरि निम्नानुसार प्रश्न छ. म इंटरव्यू यसलाई सम्बोधन गर्नुभएको, ट्वीट, र ब्लग पोष्टहरू, तर म यसलाई केही गर्न अस्पष्ट अझै पनि छ थाहा. मलाई रेकर्ड सीधा सेट गर्न प्रयास जारी गरौं: म कहिल्यै सेवानिवृत्त. मा 2012, म हुन चाहन्छु घोषणा "संगीत बाट टाढा stepping।" हो, मलाई थाहा छ कि अवकाश-इश सुनिन्छ, तर म जानबूझ कि शब्द प्रयोग गरेनन्. म थिएन किनभने म यो जानीबुझी अस्पष्ट राखिएको 100% यो कस्तो खोज्नुहुन्छ निश्चित. मलाई थाहा थियो...
तपाईं घमन्ड मा निर्मित थिए एक दैनिक रिमाइन्डर आवश्यक? हामी तपाईंको फोन लागि केही वालपेपर सँगै राख्नुभएको, ट्याब्लेट, वा डेस्कटप. त्यहाँ brag लोगो संग तल तीन सरल विकल्प हो. थप पछि आउन छन्. आनन्द लिनुहोस्! डाउनलोड आईफोन वालपेपर • डाउनलोड आईप्याड वालपेपर • डाउनलोड डेस्कटप वालपेपर डाउनलोड आईफोन वालपेपर • डाउनलोड आईप्याड वालपेपर • डाउनलोड डेस्कटप वालपेपर डाउनलोड आईफोन वालपेपर • डाउनलोड आईप्याड वालपेपर • डाउनलोड डेस्कटप वालपेपर
मेरो जीवन भर, म मौसम मार्फत जानुभएको म साँच्चै बाहिर काम गर्न उत्प्रेरित गरिएको छ जब. म उच्च विद्यालय मा थियो जब म बस बालिका प्रभावित पर्याप्त शौकीन हुन चाहन्थे (म असफल भए). मेरो विवाह अघि महिनामा म मेरो सुहागरात समुद्र तट शरीर मा काम गर्न खोजिरहेका थिए. आजभोलि, म सिर्फ म मेरो बिसवां विगतका लाइभ निश्चित गर्न प्रयास छु. मेरो motivations वर्षौंदेखि परिवर्तन, तर के परिवर्तन भएको छैन ती motivations कसरी fickle हो. शायद तिमी स्वाभाविक प्रत्येक दिन उनको प्रशिक्षण खुराक को तस्वीरहरु र भिडियो जो पोस्ट मेरो साथी बाहिर बाहिर-कराउछ काम गर्न उत्प्रेरणा हुनुहुन्छ. तर तिमी मलाई जस्तै हुनुहुन्छ भने, आफ्नो motivations एक Trampoline मा एक बच्चा जस्तै माथि र तल जाने. आफ्नो काम देखि परिणाम बाहिर सधैंभरि लामो के भने, हुनत? तपाईं थप उत्प्रेरणा हुनेछ? कडा परिश्रम बन्द Pays को शीतकालीन ओलम्पिक गत महिना महिनामा म बिजुली द्रुत bobsledders र highflying Snowboarders हेर्नुभयो रूपमा म श्रद्धा थियो. म आफ्नो पुष्ट उत्कृष्टता प्रभावित भएको थियो, म अनुशासन प्रशिक्षण बारेमा विचार गर्दा यो त्यहाँ लगियो हुनुपर्छ तर म अझ प्रभावित थियो. प्रत्येक घटना को अन्त मा जब विजेता गरेको मा विजयी खेलाडीहरूलाई उभिए ...
संगीत मेरो जीवनको ठूलो भाग त म सधैं कसरी यो सबै भन्दा राम्रो प्रयोग गर्न सोचिरहेका छु छ. मलाई विश्लेषण बिना कला रमाइलो गर्न को लागि यो कठिन छ, नोट लेने, र सोधेर प्रश्नहरूको. Beyonce अहिले हाम्रो राष्ट्रको ध्यान छ र त्यो स्पष्ट हाम्रो सबैभन्दा प्रिय पप तारा कसैको. पहिलो महिला त्यो अरू कसैको हुन सक्छ भने पनि भन्नुभयो, त्यो Beyonce हुन चाहनुहुन्छ चाहन्छु. Beyonce त्यो कहिल्यै भएको भन्दा बढी लोकप्रिय छ, त्यसैले तपाईंलाई टिभीमा बारी गर्न वा उनको बारेमा केहि देखेर बिना अनलाइन प्राप्त, उनको छोरी संग सडक तल हिँडिरहेका उनको तस्वीर उनको नयाँ एल्बम को समीक्षा देखि. म उनको प्रतिभा प्रभावित र उनको ड्राइव प्रेरित छु, तर म पनि म देख्न केही कुराहरू द्वारा हैरान छु. Beyonce र म साधारण केही कुराहरू छन् के. हामी छौं टेक्सास बाट दुवै, र हस्टन परिवार धेरै छन्. हामी एकल एल्बम को यही संख्या वरिपरि जारी गरेका दुवै कलाकार हुनुहुन्छ (त्यो हो हुनत बस थोडा थप राम्रो मलाई भन्दा ज्ञात). र अन्ततः, हामी परमेश्वरको अनुग्रहको आवश्यकता दुवै पापी हुनुहुन्छ. भनेर मनमा संग, म पूरा गर्न मौका थियो भने उनको यी म सोध्न सक्छौं प्रश्नहरूको केही छन्, केही ...
म हाम्रो जीवन को लागि परमेश्वरको इच्छा छलफल मन, जब पनि कुनै यो बारेमा मलाई असहमत. कुराकानी वास्तविक काल वास्तविक छिटो हुनत-विशेष गरी हामी विवादास्पद मुद्दाहरू कुरा गर्दा प्राप्त गर्न सक्छन्. यो कसैले बताउन उनीहरूले गलत हुनुहुन्छ लाग्छ भनेर कहिल्यै मजा छ. त्यसैले म मेरो शब्दहरू होसियार प्रयास, र बस परमेश्वरले भन्छन् के कुरा, बरु मेरो आफ्नै राय भन्दा. घडी को कल जस्तै, हुनत, कुराकानीमा समयमा केही बिन्दुमा, तिनीहरूले ट्रम्प कार्ड बाहिर निकाल्न छौँ: "तर बाइबल पनि छैन न्याय गर्न भन्न गर्दैन? तपाईं सजिलै कि पद भन्दा छोडियो, हा?"यो कहिल्यै असफल. मत्ती मा7येशू भन्नुहुन्छ, "इन्साफ नगर्नुहोस्, वा तपाईंले पनि न्याय हुनेछ। "समेत बाइबल कहिल्यै पढ्न गरेका हामी ती शब्द को लागि आफ्नो प्रवचन शब्द को यो भाग उद्धृत गर्न सक्छन्. यो हाम्रो दिन मा सबै भन्दा प्रसिद्ध बाइबल पद हुन सक्छ. र यो पनि यो पद मतलब सबैभन्दा गलत समझ बैठी गलतफहमी हामी एकअर्कालाई प्रेम मानिन्छ छौं कसरी गलत अर्थ लाउनु हुन सक्छ. त्यसैले प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ: उहाँले न्याय गर्न हामीलाई बताउँछ जब येशूले अर्थ के? उहाँले के होइन अन्तिम सप्ताह, मेरी श्रीमती र म हाम्रो चर्च मा एक विवाह कार्यशाला उपस्थित. हामी ...
जब म सामाजिक मिडियामा मेरो परिवार को तस्वीर पोस्ट, प्रतिक्रियाहरू सधैं आनन्द हो. सबै भन्दा साधारण हो, "तपाईंको छोरा सुन्दर छ!"वा" के एउटा सुन्दर परिवार!"तर अन्य साधारण प्रतिक्रियाहरू मध्ये एक छ, "आफ्नो पत्नी सेतो छ?"मान्छे कहिलेकाहीं पनि शो मा मलाई सोध्न. जवाफ हो छ. मेरी पत्नी हंगेरी को एक मिश्रण छ, इटालियन, र पोलिस-जो सबै भन्दा मानिसहरूलाई बस हो अर्थ, त्यो सेतो छ. यो केही अप्रासंगिक छ, तर निम्न स्तरका वा अरूलाई निराशाजनक. मलाई लाग्छ छैन कसैले स्तब्ध वा Interracial विवाह गरेर निराश हुनुपर्छ, तर म अझै पनि म मेरो "दौड बाहिर विवाह किन बारेमा कुरा गर्न चाहन्थे. एक फरक जातीय पृष्ठभूमि कसैलाई विवाह गर्ने निर्णय मेरो लागि एक कठिन एक थियो. म बसे र एक फाइदा र बेफाइदा सूची बाहिर लेखे कहिल्यै. तापनि यदि मैले गरे, मेरी श्रीमती "मार्टिन" को एक एपिसोड कहिल्यै देखेको छ भन्ने तथ्यलाई पनि con श्रेणी मा हुनेछ. तर इमानदार, म यो भन्दा बढी agonize थिएन वा यसलाई ठीक थियो कि बारे सल्लाह खोज्न. मलाई विवाह गर्न लागि त्यो स्त्रीको थियो भन्ने कुरामा विश्वस्त थियो, त्यो कालो थिएन तापनि. केही कहिल्यै थिएन जो एउटै नस्ल कसैले विवाह विचार थियो ...
जेसिका Barefield अतिथि पोस्ट मलाई त्याग दिएर सुरु गरौं. यस लेखमा दुष्ट सामाजिक मिडिया छ कसरी छैन. ठिक्क प्रयोग, सही हृदय मुद्रा संग, यो एक सुन्दर कुरा हुन सक्छ. यो लेखको बिन्दु सामाजिक मिडिया मसीही जीवन लागि एक pitfall हुन सक्छ र यो आफ्नो सामाजिक मिडिया खपत र सहभागिता आउँदा आफ्नो हृदय जाँच्न प्रोत्साहन गर्ने केही तरिकाहरू दर्शाउन छ. यी सामाजिक मिडिया हाम्रो पापी इच्छाहरू खुवाउन सक्छन् पाँच तरिका छन्. 1. सामाजिक मिडिया आफ्नो समय बर्बाद गर्न सक्छ यो हामीले पहिले सुनेका छैन केही छ, तर यो दोहरो लायक छ. हामीले एफिसी मा सम्झाइन्छ 5:16-17 दिन दुष्ट छन् र हामी दिइएको समय को सबै भन्दा राम्रो उपयोग गर्नुपर्ने भनेर. एक पल को लागि विचार तपाईं गरिरहेको सक्छ के हुन सट्टा जाँच ती सबै साइटहरु. एक नियुक्ति मा प्रतीक्षा गर्दा, हामी हाम्रो फोनमा लागि प्रार्थना गर्न मानिसहरूको सूची राख्न र हाम्रो परिवार र साथीहरू लागि प्रार्थना ती अतिरिक्त मिनेट खर्च सक्छ. पक्कै पनि, एक समय वा अर्को मा, हामी सबै एक दिनमा फेसबुकमा घन्टा खर्च र कहिल्यै वचन अप शीर्षकमाथिको को दोषी छन् ...
जब तपाईं एक कठिन समय मार्फत जाँदै हुनुहुन्छ, मान्छे सधैं के भन्न थाहा छैन. परिणाम अर्थहीन clichés वा तपाईं मज्जा गर्न trite प्रयासहरू छ. म सधैं cliché संग एक समस्या तिनीहरूलाई यसो भन्दै व्यक्ति गर्न कुनै अर्थ छैन कि छैन र वास्तवमा तिनीहरूलाई सुनेपछि व्यक्ति मदत छैन प्रकारको phrases- थियो गर्नुभएको. जस्तै मुर्ख कुरा, "अप्सरा Name अप" र "यो राम्रो पाउनुहुन्छ।" साँच्चै? तिमीलाई कसरी थाँहा छ? तपाईंले तिनीहरूलाई प्रकाश दिएर आफ्नो मित्र कुनै पनि पक्ष के छैन, कुनै पनि निहित छैन भनेर फ्लफी आशा. गहिरो पीडा हिट हामी रक आवश्यक जब ठोस सत्य हामीलाई धान्न. क्यान्सर संग आफ्नो पल्ट समयमा, क्रिस्टोफर Hitchens हामी वरिपरि फेंक को अर्थहीन वाक्यांश केही समान निराशाले voiced. उहाँले आफ्नो पुस्तकमा तिनीहरूलाई एक आक्रमण केही पृष्ठहरू बिताउनुहुन्छ, मृत्यु दर. उस्ले भन्यो, "खासमा, म अलिकति कि घोषणा issuing छोडेका छन् 'जे मार्न छैन मलाई मलाई बलियो बनाउँछ।' "उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, "को brute शारीरिक संसारमा ... भनेर मार्न सक्थे सबै धेरै कुराहरू छन्, तपाईं मार्न छैन, र त तपाईं एकदम कमजोर छोड्नुहोस्। "तपाईं बस आनन्द महसुस गर्न सकिँदैन? यो depressing सुनिन्छ, तर मलाई लाग्छ Hitchens एक अर्थमा सही छ. यो कि हामी एकदम सम्भव छ ...
हरेक अब र फेरि म तिनीहरू मसीही बन्न चाहनुहुन्छ भन्छन् जो कसैले कुरा छौँ, तर तिनीहरूले समय एकदम सही छैन सोच्न जस्तो. जब म उनलाई किन सोध्न, तिनीहरूले मलाई आफ्नो पापको सबै बताउन, आफ्नो कमीकमजोरी सबै, र सबै भद्रगोल अप कुराहरू तिनीहरूले विगतमा गरेका छौँ. म आफ्नो पाप बारेमा तिनीहरूलाई तर्क कहिल्यै, तर म आफ्नो अनुमानको पछाडि धकेल्नु के. तिनीहरूले पाप तरिका ख्रीष्टको आउँदै तपाईं disqualifies भनेर अनुमान लाउनुको हुनुहुन्छ, जब सही विपरीत साँचो छ. पापी हुँदा ख्रीष्ट हामीलाई राख्न गर्दैन; यसलाई हामी उहाँलाई आवश्यक कारण छ. हामी सधैंभरि प्रतीक्षा गरिने उहाँलाई अँगाल्न सिद्ध हेर्न सम्म हामी प्रतीक्षा भने. मेरो मनपर्ने उद्धरण मध्ये, चार्ल्स Spurgeon हामीलाई देख रोक्न आग्रह, येशूलाई देख सुरु गर्न. उस्ले भन्यो: "द! तपाईं भन्न, 'म पर्याप्त पश्चात्ताप छैन।' त्यो आफैलाई देख छ. 'म पर्याप्त विश्वास छैन।' त्यो आफैलाई देख छ. 'म पनि अयोग्य छु।' आफैलाई देख छ त्यो. 'म पत्ता लगाउन सक्दैन,'अर्को भन्छन्, 'म कुनै पनि धार्मिकता छ कि।' यो एकदम सही तपाईं कुनै पनि धार्मिकता छैन भन्न छ; तर यो एकदम खोज्न गलत छ ...
हामी एउटा सन्देश प्रतिक्रिया बाटो कसले देखि छ मा निर्भर गर्दछ. मलाई तपाईं एउटा उदाहरण दिन गरौं. पराई सडक मलाई सम्म हिँड्छ र भन्छन् भने, "मलाई वास्तविक छिटो आफ्नो कार साँचाहरू उधारो गरौं. म आफ्नो पन्जा बक्स बाहिर केही पैसा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ,"म शायद उहाँले पागल जस्तै उसलाई देखो र बन्द हिंड्न थियो. तर मेरी श्रीमती मलाई सम्म आउन र त्यसै भन्न थिए भने, म एक दोश्रो लाग्यो को बिना उनको साँचाहरू दिन चाहन्छु. हामी बोल्न जसले फरक आधारमा सुन्न र प्रतिक्रिया. थप एक परिदृश्य कस्तो. मेरो असल मित्र को एक म मेरो सम्पूर्ण जीवन भन्दा आफ्नो सिद्ध अधिकार पेश गर्नुपर्छ भनेर जिद्दी भने, उहाँले पागल जस्तै म उसलाई शायद हेर्न र केही नयाँ मित्र प्राप्त जाने. मलाई त्यो बाटो प्रतिक्रियाका लागि र यो ठीक हुनेछ. तर के परमेश्वरले यदि आफूलाई धेरै नै कुरा?2तिमोथी 3:16 भन्छन्, होईन सारा पद "धर्मशास्त्रमा भएका सबै परमेश्वरको प्रेरणाबाट छ।" त्यो, तर ती पाँच शब्द एक जीवनकालमा लागि मनन गर्न पर्याप्त भन्न. धर्मशास्त्रको शब्दहरू परमेश्वरको शब्दहरू हुन् भन्ने तथ्यलाई आफूलाई महत्वपूर्ण छ. र ती मलाई लाग्छ ...
एयर Jordans प्रतिष्ठित छन्. म तिनीहरूलाई धेरै हुनत बढन लगाउने छैन, मेरो आमाबाबुले मलाई हास्यास्पद महंगा जूता किन्न इन्कार गर्ने. म यसलाई मन थिएन, तर म कहिल्यै एक जोडी मा मेरो हात प्राप्त हुनेछ थाह थियो. तिनीहरूले अवस्थित छैन मानिरहेको द्वारा - त्यसैले म सामना गर्न बाध्य भएको थियो. यो वर्ष एक लामो दम्पतीले Reebok पार प्रशिक्षक स्टाइलिश थिए आफैलाई विश्वस्त गर्न प्रयास थियो. तर म पुरानो पायो रूपमा, म बुझे Jordans बेवास्ता गर्न कठिन थिए. मेरो साथी को सबै एक जोडी वा दुई थियो, र मेरो साथी को एक downright तिनीहरूलाई आसक्त थियो. जब नयाँ शैली बाहिर आए, उहाँले केही मुक्त समय थियो जब बस स्थानीय फुट लकर द्वारा रोक्न हुनेछ; त्यो प्राप्त आफ्नो जीवनको निर्माण नयाँ जोडी. उहाँले निश्चित गरे उनले सबै यर्दन जारी मिति थाह, उहाँले विभिन्न रंग मा नै जूता किनन हुनेछ, र उहाँले अक्सर जुत्ता स्टोर अगाडि बाहिर छाउनीमा बसोबास शनिबार बिहान खर्च हुनेछ. यो मेरो मन उडायो. त्यसैले अन्तमा म सोध्न थियो, "के यी जूता बारेमा यति विशेष छ?! स्पष्ट म केहि बाहिर हराइरहेको छु।" Jordans मेरो साथीको obsession एक बयान गरे. साँचो वा छैन, तिनले यसो भन्दै थिए ...
कसैले नाम droppers रुचि. तपाईं म कुरा गर्दैछु जो थाह. जो तपाईं चाहनुहुन्छ ती मानिसहरू तपाईं शायद जान्न चाहन्छु कि मान्छे थाह थाह. म "namedropper लाग्छ जब,"त्यहाँ मनमा तुरुन्तै आउँछ कि एक मान्छे हो. म मात्र उहाँलाई पटक एक मुट्ठी भेट गर्नुभएको, तर हरेक समय हामी कुरा गर्नुभएको, हाम्रो कुराकानी आधा सरासर नाम थोपा साथ अँगालेका छ. उहाँले "ठूलो समय" मान्छे को राम्रो नम्बर थाह, र उहाँले कुनै पनि कुराकानी ती नाम सुटुक्क छिर्ने एउटा निरर्थक क्षमता छ. यहाँ एउटा उदाहरण छ. म भन्छु, "अरे मानिस, कति बज्यो?"उहाँको जवाफ: "ओह, यसलाई दिउँसो बारेमा. म पेरिस दिउँसो माइकल ज्याक्सन संग पुट पुट प्ले समय मलाई सम्झना दिलाउँछ। "शब्द? इमान्दारी पुर्वक, यो सिर्फ हुनत हामीलाई irk कि droppers नाम होइन. यो सामान्य मा घमन्ड गर्ने मानिसहरूको. हामी आफ्नो उच्च विद्यालय फुटबल दिन घमन्ड सुनेर हुर्केका मानिसहरूको थकित प्राप्त (यो अघि बढ्ने समय हो, सर). हामी उनीहरूले भ्रमण बारे हरेक विदेशी ठाउँ tweet केही बाटो पत्ता भन्ने हाम्रो सुअवसर मित्र को मलिन बढ्न. र हामी हाम्रो लागि विस्तार हरेक महंगा वस्तु तिनीहरूले खरिद गर्ने मान्छे को लागि धेरै धैर्य छैन (तिनीहरूले Rappers नहुन्जेल, को पाठ्यक्रम). यो covertly बारेमा ब्रेगिङ्ग गर्नुपर्छ कि ...
म सुरुदेखि Trayvon मार्टिन सागा संग राखिएको गर्नुभएको. तपाईं को धेरै जस्तै म हेर्नुभयो समाचार कभरेज, यो लेख पढ्न, र साथीहरूसँग यो बारेमा कुरा. यो सार्वजनिक कुराकानी प्रभुत्व र अमेरिका मा दौड बारेमा धेरै आवश्यक छलफल सुनेपछि. नस्लवाद तितो वास्तविकता हाम्रो अनुहार अगाडि धक्का थियो, र पनि गर्ने रुचि ती बहाना यो अवस्थित छैन यसको बारेमा कुरा गर्न बाध्य भए. भन्दा एक वर्ष पछि, Trayvon गरेको हत्यारा प्रयास र दोषी फेला परेन गरिएको छ. मतलब हामी विवादहरू देखि मा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ? तिनीहरूले तिनलाई निर्दोष फेला, त्यसैले यी "दौड मुद्दाहरू" हामी लाग्यो वास्तविक रूपमा हुनु हुँदैन तिनीहरूले थिए, ठिक? त्यो सत्य देखि थप हुन सकेन. म तथ्य बारे बहस को कुनै इरादा, Trayvon चरित्र, वा यो दुःखद अवस्था मा जूरीको फैसला, तर मलाई लाग्छ केही चर्चा जारी गर्नुपर्छ के. परीक्षण माथि छ, तर कुराकानी हुनु हुँदैन. किन ब्याज? मलाई थाहा धेरै यस विशेष परीक्षण किन यति धेरै को ध्यान कब्जा गरेको छ जो आश्चर्य हो. केही कालो मान्छे किन यति Trayvon मार्टिन समानुभूति देखाउन छिटो अन्यको आश्चर्य, उसले आफ्नो को मुद्दा थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद ....
लामो सम्झना रूपमा लागि, हिप हप परमेश्वर र धर्म संग एक obsession थियो. म सबै Rappers धार्मिक भक्त छन् भन्ने मतलब छैन. तर केही Rappers - वा कुनै पनि कलाकार भनेर कुरा को लागि - आफ्नो कला मा कहीं परमेश्वरले समावेश गर्न चाहनाको मिलाउ गर्न सक्नुहुन्छ. हामीलाई परमेश्वरको बारेमा बोल्न लागि यो प्राकृतिक र राम्रो, तर प्रश्न छ, हामी के भनिरहेका छन्? केही भन्न हुनेछ, "यो केवल संगीत छ. त्यसैले गम्भीर यसलाई लिने छैन!" तर के एक Rapper माइक तपाईंलाई लाग्छ सक्छ भन्दा बढी गम्भीर छ मा भन्छन्. केही आफ्नो निष्कपट धार्मिक विश्वास व्यक्त गर्न हिप हप प्रयोग वा तत्संबंधी कमी छ. इस्लाम, पाँच Percenters, मसीहीधर्म, Agnosticism, नास्तिकता, र अन्य धर्म सबै कला फारम मार्फत बढुवा गरिएको छ. मलाई लाग्छ हिप हप हामीले भावुक हुनुहुन्छ केहि गर्न वफादारी र भक्ति व्यक्त गर्न विशिष्ट अनुकूल छ. आंशिक किनभने संस्कृति गरेको सशक्त rawness को आंशिक किनभने हिप हप थप शब्दहरू लागि अनुमति दिन्छ, यसरी तपाईं वास्तवमा "सिकाउन सक्छन्।" तर समय हिप हप को सबै भन्दा बढी आइतबार विद्यालय कक्षा भन्दा एक Barbershop जस्तै छ. Rappers बेतहाशा मुख बन्द चलान, कि तिनीहरूले बारेमा वा छैन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ के थाहा. बनाम ईमानदारी. Recklessness ...
यो वर्षको सुरुमा म मेरो नयाँ पुस्तक भ्रमणमा गए, असल जीवन. प्रत्येक रात, म प्रश्नको जवाफ प्रयास गर्ने एक भाषण दिनुभयो, "के यो राम्रो जीवन बिताउन मतलब?" कुराकानीानोगा मा, तमिलनाडु, हामी सन्देश रेकर्ड र म माथि यो पोष्ट गर्नुभएको. अक्टोबर मा जारी पुस्तक 1, 2012 र तपाईं यसलाई यहाँ खरीद गर्न सक्नुहुन्छ. पुस्तक बारेमा थप जान्न यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं यहाँ राम्रो जीवन एल्बम खरिद गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं राम्रो जीवन बाँचिरहेका छौं?
तपाईं को सबै भन्दा मलाई एक Rapper र कलाकार रूपमा थाहा, तर सत्य छ, हृदय मा म सधैं प्रचारक भएको छु. लामो म संगीत बनाउन गरिएको छ रूपमा लागि, मेरो गहिरो इच्छा सुसमाचारको घोषणा र भलाइ र येशू ख्रीष्टको महिमा घोषणा गर्न भएको छ. परमेश्वरको अनुग्रह द्वारा म एक सार्वजनिक मञ्चमा त्यसो गर्न संगीत प्रयोग गर्न मौका थियो गर्नुभएको. म यसलाई हरेक दोस्रो प्रेम गर्नुभएको र म उत्कृष्टता यो के गर्न प्रयास गर्नुभएको. वर्षौंदेखि, म परमेश्वरले मलाई बस संगीत बनाउन कल र लैस मलाई sensed गर्नुभएको, तर प्रचार गर्न पनि र लेख्न. किन गत वर्ष म राम्रो जीवन लेखेका छ, एउटै शीर्षक मेरो रेकर्ड पछि सन्देश गहिरो dives एक पुस्तक. म गरिएको छ रूपमा म अन्तिम पतन म एकदम धेरै छैन यात्रा हुनेछ भनेर घोषणा किन यो पनि हो. म एक विश्वासी पास्टर कसरी हुन सिक्न चाहन्छन्, र मात्र साँच्चै एक स्थानीय चर्चको सन्दर्भमा हुन सक्छ. त्यसैले म वाशिंगटन मा मेरो चर्च मा ईश्वरीय pastors सिक्ने लगानी गर्न समय छु, डीसी. प्रभु इच्छुक, म मेरो मण्डली मा कर्मचारी मा सेवा रूपमा, म पनि गर्न सक्षम ...
यहाँ म भजन मा प्रचार एक हाल प्रवचन देखि अडियो छ 142. हामी सबै कठिन समयमा मार्फत जाने, तर भजन पनि खराब समयमा हामी परमेश्वरको आवश्यक सबै कुरा पाउन सक्छौं भनेर हामीलाई देखाउँछ. चार अंक हो: म. भगवान समस्या द्वितीय को टाइम्स हाम्रो मित्र हो. भगवान समस्या III को टाइम्स हाम्रो संरक्षण छ. भगवान समस्या को टाइम्स चतुर्थ हाम्रो खजाना छ. परमेश्वरको समस्या को समय मा हाम्रो उद्धारक छ
मेरो पुस्तकको विमोचन को उत्सव मा, असल जीवन, यहाँ "एक सोह्र लागि आधिकारिक भिडियो," मेरो नवीनतम एल्बम बाट, पनि असल जीवन भनिन्छ.
उहाँले आफ्नो नवीनतम एल्बम बनाउने प्रक्रियामा Highs र lows छलफल रूपमा यात्रा ली संग दृष्य पछि एक नजर "असल जीवन।"
म राजनीतिक अधिवेशनमा अधिकांश यी अन्तिम दुई हप्ता हेर्नुभयो. मलाई सार्वजनिक वक्ता मदत गर्न सकिएन तर सन्देशहरू र उम्मेदवारको oratory कौशल र तिनीहरूका समर्थकहरू माथि-विश्लेषण. भनेर मञ्चमा हरेक व्यक्ति व्यक्तिगत कथाहरू र / वा ठूलो प्रतिज्ञा तपाईंलाई राजी गर्न प्रयास. म स्वीकार छौँ, आफ्नो इच्छा केही महान थिए, तर भाषण को सबै भन्दा गणना महसुस, खाली, र विशुद्ध राजनीतिक- मलाई कम्तिमा. यो कुरा अंक केही गलत पनि सिधा माथि थिए. तर मञ्चहरूमा वाद यो पोस्ट को कुरा हो. म बुझे कुराहरू को एक दल प्रयास बेला तपाईं आफ्नो उम्मेदवार बेच्न थियो, तिनीहरूले पनि आफ्नो worldviews बेच्न गर्दै थिए. तिनीहरूलाई अनुसार, भौतिक propserity प्रतिज्ञा गरिएको देशमा छ, र आफ्नो पार्टी आफ्नो मोशाले हुन चाहन्छ. दृष्टिकोण मा, जब तपाईं मेहनत असल जीवन धनी रही छ, र आफ्नो उम्मेदवार जसले तपाईंलाई त्यहाँ लिन सक्छ मुक्तिदाता छ. अब धन बारे पापी केही त्यहाँ. र मेहनत लागि पुरस्कृत भइरहेको राम्रो कुरा हो, तर जहाँ हाम्रो आशा झूट हुन सक्दैन. धन हाम्रो अन्त लक्ष्य हुनु हुँदैन, यो एक ठूलो अन्त गर्न एक माध्यम हुनुपर्छ. हामी पनि उठयो सक्दैन ...
यहाँ म भजन मा हालै प्रचार एक प्रवचन छ 95:10-11. मेरो3अंक सरल थिए: म. पाप परमेश्वरको रिस Provokes द्वितीय. पाप एक Alernate पथ III छ. पाप परमेश्वरको विश्राममा हामीलाई राख्छ म यो गर्न प्रोत्साहन छ प्रार्थना
"सुन्दर जीवन मा ली यात्रा" Vimeo परमेश्वरको इच्छा देखि. पहिलो गीत म मेरो हालैको एल्बमका लागि लेखे, "असल जीवन" "सुन्दर जीवन भनिन्छ गीत थियो।" इच्छा परमेश्वरले मलाई त्यो गीत र मेरो हृदय यसलाई पछि बारेमा सोधे. यहाँ आफ्नो सम्पूर्ण ब्लग पोस्ट छ. र यहाँ गीत गीत को हो, जो वी विशेषताहरु. गुलाफ: हुक: सुन्दर जीवन भित्र बैठक सार्दै सास त्यसैले आशा आऊ परमेश्वरको उहाँले सुन्दर सुन्दर जीवन पद दिनुभयो जब उहाँले गरिरहेको थियो के थाह दिनुहोस् 1: प्रिय बहिनी, म थाहा मा यो माध्यम जाँदै तपाईंको गर्भमा बच्चा भन्ने केही सजिलो पल्ट छैन ठाँउ तपाईं सुन्न, तर तपाईं प्रयास गरिएन फिर्ता तपाईं यो सबै लिन चाहन्छु कि तपाईं भनी थाह थियो भने, तर तपाईं एक सुत्र छैन कि आफ्नो प्रेमी संग समय, कि लेट रात तपाईं प्रेम बनाउने थियो लाग्यो जब, तपाईं जीवन बनाउन र अब यसलाई अन्याय महसुस गर्नुपर्छ भनेर, मानिस यसलाई तपाईं एक जीवन पायो छैन रुचि छैन, गोली, यस समय साँच्चै छैन एकदम म आफ्नो पीडा बुझ्न तर मलाई थाहा तपाईं निराश र लज्जित महसुस हुँदैन अनि म आफ्नो पेट मा बच्चा उहाँले पायो गर्नुपर्छ खेल छैन भनेर थाह तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ सही छैन ...
आफ्नो धन लागि परमेश्वरको मानिस एक मा सबै कुराहरू छ. धेरै साधारण सम्पत्तिहरू उहाँलाई अस्वीकार हुन सक्छ, वा उनलाई छ उहाँले अनुमति दिएको छ भने, तिनीहरूलाई को आनन्दको त्यसैले तिनीहरू कहिल्यै आनन्द आवश्यक हुनेछ भन्ने स्वभावका गरिनेछ. वा उहाँले तिनीहरूलाई जान हेर्न पर्छ भने, एक एक पछि, उहाँले मुशकिल से हानि महसुस हुनेछ, सबै कुराको स्रोत भएको लागि उहाँले एक सबै सन्तुष्टि मा छ, सबै खुशी, सबै आनन्द. उहाँले वास्तवमा केही गुमाएको छ गुमाउन सक्छ जेसुकै होस्, उहाँले लागि अब एक मा यो सबै छ, र त्यो विशुद्ध छ, वैध र सधैंभरि. A.W. Tozer, परमेश्वरको धावक
बाइबलीय Masculinity र Vimeo परमेश्वरको इच्छा देखि रोल मोडेल को महत्व. इच्छा परमेश्वरले मेरो साथीहरूले मलाई पुरुषार्थ र गर्न अवरोध बारेमा केही प्रश्नहरू सोधे कसरी समस्या समाधान गर्न. यहाँ म भने के
कसरी रोमी 8 Vimeo परमेश्वरको इच्छा देखि यात्रा ली मद्दत गर्छ. इच्छा परमेश्वरले मेरो साथीहरूले मलाई सबैभन्दा मलाई मद्दत गर्छ कि धर्मशास्त्रको खण्डमा बारेमा साझेदारी गर्न आग्रह. यो क्लिप मा म रोमी अध्याय मनन 8
जस्तो कि तपाईं जान्दछन् धेरै, म मेरो नवीनतम एल्बम साथ जान पुस्तक मा काम गरिएको छ, असल जीवन. खैर यो पुस्तक Moody प्रकाशक संग जारी गरिनेछ अक्टोबर मा 1, 2012. तल प्रेस विज्ञप्ति मा यो बारेमा थप पढ्नुहोस्. यो विज्ञप्ति सूचित गर्न TheGoodLifeTheBook.com र जाने. हिपहप कलाकारको यात्रा ली अक्टोबर मा असल जीवन जारी DEBUT बुक 1, 2012 गरेर Moody प्रकाशक आगामी परियोजना वर्तमान एल्बम विज्ञप्तिमा बनाउछ र "असल जीवन" redefines नयाँ र थप महिमित यात्रामा झूट को प्रकाश मा मान्छे अब प्रत्यक्ष गर्न चुनौतीपूर्ण तर प्रारंभ द्वारा. LOS ANGELES, क्यालिफोर्निया. (सक्छ 17, 2012) -Billboard चार्ट-Topping हिप हप कलाकार यात्रा ली आफ्नो debut पुस्तक विमोचन अप gearing छ, असल जीवन (Moody प्रकाशक). अप्रिल मा जारी जो आफ्नो नवीनतम एल्बम एक लडी 10, 2012 पहुंच रेकर्ड मार्फत, असल जीवन स्टोर अक्टोबर मा राष्ट्रव्यापी मारा हुनेछ 1, 2012. "वर्षसम्म, म ख्रीष्टको हाम्रो संसार दृश्यहरु र अंक चुनौती कि संगीत गरिरहेको छु - तर त्यहाँ सधैं संगीत सीमितता छन्, मात्र यति त्यहाँ किनभने तपाईं एउटा गीत मा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ,"यात्रा भन्छन्. "एल्बम असल जीवनको श्रोताहरूलाई फोटो दिनुभयो, र पुस्तक हुनेछ ...
असल जीवन भ्रमण यो हप्ता बन्द पछीको! जो मिति तपाईंलाई सबैभन्दा नजिकको हुनेछ पत्ता. हामी मिनियापोलिस मा हुनेछु, मिशिगन, भर्जिनियाबिच, नेशविल, ओरलैंडो, र डलास. थप मिति साथै चाँडै थपिनेछ! टिकट लागि लिंक क्लिक वा ReachRecords.com/events जाने.
यी मेरो नयाँ एल्बम "असल जीवन मा मेरो गीत iLove देखि गीत हो।" अरू कुनै को iLove ग्रस्त? पद 1: मेरो प्रेमिका नाम एक म आकाश Stays मा मेरो छेउमा तारा जस्तै उज्यालो चम्कन्छ संग सुरु, यसको गाढा त्यो ज्योति जब त्यो धेरै befriends, र हामी उनको सट्टा हाम्रो सास पक्रने बिना हामी उठाउनका गर्दा हाम्रो कदम उनको चलान हेर्दै को त्यो Addicting छ मा घूर उनको आँखा हराएको प्राप्त, सत्य: हामी fiends हुनुहुन्छ तर हामी गोंद sniffing छैन, हामी सिर्फ त्यो हामीलाई नियमहरु स्क्रीन गर्न चिपके हुनुहुन्छ, त्यो हामी शायद दुई मानव जगतले उनको बहिनीहरू भन्दा उनको दुई लिन चाहन्छु छल्ले जब प्रमाण हेर्न? केही केही साना हामी उनको एम संग दैनिक अर्डर हामी उसलाई उनको राख्न हामी म साँच्चै उनको चाहिएमा उनको मलाई सोध्छन् किन्न सक्छन् भने पनि छैन त्यो खस्छ गर्दा सिंक बडा? म जस्तै हुन, "क्रमबद्ध को" तर म उनको अदालत थियो मल मा उनको देखेको जब म उनको सामान राख्न, फेरि केटा म उनको चाहनुहुन्छ मेरो जीवनमा उनको बिगार्छ गर्छन्, उनको एक सिक्का केटा भूल लागि म केहि चाहन्छु, त्यो थप म सबै समय उनको साथ छु एक चौथाई जस्तै छ,...
मेरो चौथो एकल एल्बम, "असल जीवन" आधिकारिक जारी गरिएको छ! यहाँ आईट्युन्सबाट एल्बम किन्न. तपाईं पनि Lifeway मा पसलहरुमा एल्बम टिप्न सक्छ, परिवार मसीही, Mardel, र लक्ष्य & वाल-मार्ट (पसलहरु चयन). साथै, तपाईं "म राम्रो छु लागि नयाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ" यहाँ Lecrae सुविधा. हामी सतावट बारेमा जागरूकता उठाउनु र दृढ विश्वासीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न यो एक मा शहीदहरूको आवाज साथ सहयोगी. प्रभु चुनौती यो परियोजना प्रयोग र धेरै प्रोत्साहन भनेर प्रार्थना मलाई सामेल!
यो कोही मृत्यु को दिन सम्झना गर्न सामान्य छ. एक प्रेम एक गुमाए जो कोहीले उनीहरूले मा पारित दिन कहिल्यै बिर्सन छौँ भनेर थाह. यो जीवन को अन्त छ, र यो हृदयविदारक छ. पक्कै, मानव जाति रूपमा, हामी प्रियजनहरूलाई मात्र होइन सम्झना गर्छन्. जब महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक तथ्याङ्कले prematurely मर्न, हामी सम्झना र तिनीहरूलाई हामीलाई ल्याइएका दिन शोक. हाम्रो राष्ट्र दिन मार्टिन लुथर राजा जुनियर सम्झना. गोली थियो, र दिन यूहन्ना फा केनेडी मृत्यु भएको थियो. तर ती विशेष दिन रूपमा राम्रो उल्लेख कहिले. ती भयंकर दिन थिए, जहाँ प्रिय मानिसहरू खराब assassins द्वारा हत्या गरियो. यद्यपि, दुई हजार वर्षअघि येशूले नासरतका आफ्नै खराब assassins द्वारा हत्या भएको थियो, र हामी "राम्रो रूपमा त्यो दिन सम्झना" शुक्रवार. सबैभन्दा बारेमा मानव इतिहास मानिसलाई जबरदस्ती कुटपिट थियो कुरा र हत्या गर्दा उहाँको शत्रुहरूले के दिन बारेमा यति राम्रो? दुष्ट मानिसहरू परमेश्वरको पुत्र हत्या गर्न प्लट थियो भन्ने तथ्यलाई दुःखद छ र यो पक्कै पनि सबैभन्दा ठूलो पाप कहिल्यै प्रतिबद्ध छ. तर उहाँको मृत्यु यसलाई अघि वा पछि कुनै पनि अन्य मृत्यु विपरीत छ . हामी धेरै कारण त्यस दिन कल गर्न सक्छन् "राम्रो" शुक्रवार. उहाँले ...
"म राम्रो छु" पछिल्लो गीतहरू मध्ये एक मेरो नयाँ एल्बम लागि लिपिबद्ध गर्न थियो, असल जीवन. Lecrae र म वास्तवमा यस्तो लेखे र एक सम्पूर्ण फरक गीत रेकर्ड, र हामी सुरुमा यो मन परायो. तर अन्ततः हामी यसलाई बस राम्रो थियो निर्णय; र हामी बाहिर ठूलो कुरा राख्न चाहन्थे. त्यसैले म उहाँलाई लागि केही Beats प्ले म अझै लागि गीत लेख्नुभएको छैन भन्ने, र हामी यो एक प्रेम दुवै थिए. यो महाकाव्य थियो, आक्रामक, र catchy. म ख्रीष्टमा हाम्रो सुरक्षा कुराकानी एउटा गान लेख्न चाहन्थे तिनलाई यसो भन्नुभयो. म डरले जीवित रोक्न र रोमी बाँचिरहेका सुरु गर्न मसीहीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्थे 8. हामी निर्णय "म राम्रो छु" विषय, हामीले मदतको लागि प्रभु सोधे, र हामी पहुंच गरेको अटलान्टा स्टूडियो को विपरीत कुनामा मा लिख ​​सुरु. हामी त्यो रात हाम्रो स्वर को सबैभन्दा, र यो सबै गरेको थियो जब हामी यो प्रेम. आशा छ सामग्री डाइजेस्ट गर्न गीत यस व्याख्या हामीलाई मदत गर्नेछ ... पद 1: म समस्या गरेको मेरो लागि आउँदै गरेको सुन्न, मृत्यु मेरो ढोका तरिका छ / डर भन्छन् I'ma ब्रो नष्ट, तर मेरो प्रभु के भन्न छैन / उहाँले म दोषी हुनत छ भने ...
यो मानिसलाई माथि सम्मेलन यहाँ लागि दर्ता र मेरो एल्बम बारेमा थप जान्न “असल जीवन" यहाँ
सबैलाई माया गर्न चाहन्छ. हामी यसलाई स्वीकार वा छैन कि, हामी सबै राम्रो लाग्यो र अरूले मूल्यांकन महसुस गर्न यो प्राकृतिक इच्छा छ. हामी धेरै कसैले हामीलाई प्रेम गर्न खोज्ने हाम्रो सम्पूर्ण जीवन खर्च, आशा छ कि मा कोही- जो कोहि- भित्र यो तिर्सना पूरा गर्नेछ. राम्रो तिमी आज रोमान्स आफूलाई गुमाउन योजना हुनुहुन्छ र तपाईं अन्तमा भनेर तिर्सना पूरा छौँ भनेर आशा हुनुहुन्छ भने, म आफ्नो उद्देश्य पनि कम छ भन्ने जान्न चाहन्छु. तपाईं मैनबत्ती प्रकाश खाने राती मा सबै को प्रेम पाउन छैन. तर, त्यहाँ सबै शक्तिशाली छ, सबै सन्तोषजनक, सिद्ध प्रेम उपलब्ध. के तपाईं कहिल्यै कल्पना सक्छ भन्दा बढी प्रेम गर्ने परमेश्वरले त्यहाँ. प्रेम fickle छैन र तपाईंले उहाँलाई woo वा यसको लागि काम छैन. के परमेश्वरले हामीलाई प्रेम? मलाई थाहा हामी कहिलेकाहीं धेरै परमेश्वर साँच्चै हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ कि वा आश्चर्य. उहाँले टाढा त देखिन्छ. र शायद हामी उहाँले यो हाम्रो लागि स्पष्ट गर्न केही गरे भने शङ्कालु रोक्न चाहन्छु. सत्य हामीलाई, उहाँले पहिले नै छ. बाइबल यसो भन्छ, "परमेश्वरले आफ्नो प्रेम हाम्रो लागि हामी पापी छदैं भनेर देखाउँछ, ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो।" र फेरि भन्छन्,...
"रोबोट" मेरो आगामी एल्बम को पहिलो गीत हो "असल जीवन" अप्रिल जारी 10. म आफ्नो रोबोट हुँ तल गीत र निःशुल्क डाउनलोड गर्न को बोल हो, म मेरो puppeteer छैनन् र म एक ड्रोन भयो नयाँ मास्टर हुँ र म म पद गएका छु सम्म राम्रो जीवन चाहनुहुन्छ एक्लै उहाँलाई पछ्याउन एक क्लोन छैन 1: हे म थाहा यसलाई पागल सुनिन्छ तर म साँच्चै एक रोबोट एक बच्चा मलाई कुनै वास्तविक जीवन जन्म भएको थियो मानव भन्दा कम जन्म भएको थियो, मैले मेरा भूमिका खेलेका कुनै आत्म नियन्त्रण, म सिर्फ म मेरो पहिलो अर्डर पायो भनिएको थियो के गरे, म सिर्फ एक दिन पुरानो थियो तर म एक मौका छैन, मेरो हृदय तरिका चिसो मेरो हृदय क्रम लिए थियो कारण, मैले मेरा रोबोट मित्र संग मेरो रोबोट लुगा मा Chilling थियो त्यसैले म दासत्वबाट अन्तर्गत बिक्री गर्ने मोल्ड तोड्न सकेन र म नियन्त्रण गर्न सकिएन, र मेरो रोबोट रोबोट तरिकामा बाँचिरहेका प्रवाह, कि म मेरो रोबोट प्राण मुक्त हुन सकेन म मैले सुने सम्म सबै छ कारण, म जस्तै ... तपाईं सधैं मलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास किन Hook छु? तपाईं भन्ने मेरो मालिक छैनन् ...
"असल जीवन" खस्छ अप्रिल 10. प्राप्त “रोबोट" यहाँ निःशुल्क
पहिलो आधा लागि 2011, म कुनै गीतहरू गरे, कुनै सुविधाहरू, कुनै शो, कुनै केही. म वाशिंगटन डीसी सारियो र बारेमा लिए5महिना एक pastoral इंटर्नशिप लागि बन्द. तापनि म हरेक रात संसारको यात्रा थिएन र मानिसहरूको समुद्र को सामने उभिरहेका, यो मेरो जीवनको सबैभन्दा फलदायी मौसम थियो. को इंटर्नशिप समाप्त जब म फेरि यात्रा सुरु र बिस्तारै नयाँ संगीत मा काम सुरु. वरिपरि म मेरो चौथो एकल एल्बम मा काम पूरा गियर मा kicked गिर. र मेहनत को महिना पछि, एल्बम धेरै राम्रो गरेको छ. म पनि म कसरी उत्साहित यसलाई जारी गर्न हुँ छैन व्यक्त गर्न सक्छन्. म सधैं मान्छे म उनलाई दिइएको छैन केहि दिन खोजिरहेको छु. म पहिले नै गर्नुभयो एल्बम remake गर्न चाहँदैनन्. म तपाईंलाई एउटा नयाँ एल्बम दिन चाहनुहुन्छ, नयाँ संगीत संग, र त्यहि पुरानो सत्य जन्मोत्सव मनाउने नयाँ तरिका. मा 2006 मेरो पहिलो एल्बम मा, तिनीहरू केवल थाहा पाए भने, म तिनीहरूलाई थाहा चाहन्थे जसले एउटा भव्य परमेश्वरको बारेमा मानिसहरूलाई बताउन चाहन्थे. मा 2008, "20/20" बाहिर आए र म वास्तविक दर्शन संग प्रभु हेर्न मान्छे प्रोत्साहन गर्न चाहन्थे.2वर्ष पछि, "बीच ...
यहाँ प्रदर्शनमा MLK गरेको साहसी नेतृत्वको छ (म कहिल्यै पढ्नुभयो सबै भन्दा राम्रो लेखन केही उल्लेख छैन). उहाँले अन्यायपूर्ण व्यवस्था अँगालेको गर्न इन्कार र धैर्य प्रतीक्षा गर्न इन्कार. उहाँले मानिसहरूको सम्पूर्ण जाति को तर्फबाट पहल लिन्छ. कालो मानिसको रूपमा, म उसलाई मार्फत पूरा काम को लागि परमेश्वरको आभारी छु. र मसीहीको रूपमा, उहाँले जस्तै म जस्तै कठिन न्याय लागि लड्न चाहनुहुन्छ, येशूले मात्र सिद्ध न्याय ल्याउन सक्छ भन्ने मनमा पालन गरेमा. र उहाँले हुनेछ. यो MLK गरेको प्रसिद्ध पत्र एक अंश हो. तपाईं एक मौका प्राप्त जब तपाईं सारा कुरा पढ्नुपर्छ. "हामी भन्दा धेरै पर्खेको छ 340 हाम्रो संवैधानिक र परमेश्वरको दिइएको अधिकार लागि वर्ष. एशिया र अफ्रिकाको राष्ट्रहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त तिर jetlike गति बढ्दै हुनुहुन्छ, तर हामी अझै पनि एक भोजन काउन्टरमा एक कप कफी प्राप्त तिर घोडा अनि बग्गीमा गति छिर्न. सायद यो भन्न अलगाव को टीस डार्ट्स महसुस कहिल्यै भएकाहरूलाई लागि सजिलो छ, "प्रतीक्षा गर्नुहोस्।" तर तपाईंले आफ्नो इच्छामा भीषण मोब्स लिंच आमा र पुर्खाहरूले देखेको छ जब र विधिपूर्वक आफ्नो बहिनीहरूले र भाइहरू डुबा; तपाईंले देख्नुभएको छ घृणाले भरिएको प्रहरी सराप्न,...
आज हामी नागरिक अधिकार आन्दोलन को मुख्य नेता को विरासत मनाउन, डा. मार्टिन लुथर राजा जुनियर. प्रभु राष्ट्रको प्रेरित गर्न यो मानिस प्रयोग, र समानता तिर एक मान्छे सार्न. त्यहाँ अझै पनि गरिन काम छ, तर आफ्नो योगदान अमूल्य थियो. कुनै नायक सिद्ध छ, र डा. राजा कुनै अपवाद थियो, तर म धेरै तरिकामा उहाँको पराउँछु र म आफ्नो पैतृक प्रेरित छु. यहाँ मलाई प्रेरित भनेर आफ्नो जीवनको बारेमा तीन कुरा छन्. 1. न्याय डा लागि आवेग. राजा हाम्रो संसारमा व्याप्त थियो कि अन्याय द्वारा वाक्क थियो, र यो विरुद्ध लडिरहेका आफ्नो जीवन समर्पण. बाइबलमा, उहाँले उहाँको संसारको लागि परमेश्वरको दर्शन देखे, उहाँले अगमवक्ताहरू दमन अन्त लागि कल देखे, र उहाँले पारित गर्न आउने न्याय हेर्न भावुक थियो. म न्याय लागि यो आवेग पराउँछु, र प्रार्थना परमेश्वरले मेरो हृदय मा यो काम जारी थियो. म थिचोमिचोमा परेका लागि लड्न र निराशजनक गर्न सुसमाचार प्रचार गर्न चाहनुहुन्छ. 2. नेतृत्व आफ्नो youthfulness बावजुद, डा. राजा भविष्यसूचक भाषण र क्रिस्टल स्पष्ट दर्शन आन्दोलन को नेता रूपमा निस्कनु उसलाई नेतृत्व. उहाँले फिर्ता बस्न थिएन र गुनासो, उहाँले अप कदम र ...
सप्ताह को एक जोडी पहिले, म evangelize हरेक विश्वासीले जिम्मेवारी बारेमा परिसर आउटरीच राष्ट्रीय सम्मेलन मा कुरा. मेरो पाठ थियो2कोरिन्थी 5:18-21. यहाँ सत्र देखि भिडियोको. एउटा जीवन | यसलाई साझेदारी गर्नुहोस् - Vimeo मा परिसर आउटरीच देखि ली यात्रा. तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यहाँ म साथै एक भाग थियो एक प्यानल छलफल बाट भिडियो. छलफल परिसर सेवाको थियो, स्थानीय चर्च, महान् आयोग, आदि: परिसर आउटरीच देखि Vimeo मा Pastors प्यानल. प्लस, म तपाईंलाई सम्मेलन बाट सबै अन्य मिडिया जाँच सिफारिस. त्यहाँ ठूलो शिक्षा को टन म edifying हुन फेला छौँ लाग्छ भन्ने थियो.
तपाईं यूनिभर्स परमेश्वर अस्वीकार? यसलाई विश्वास गर या नगर, यो हामी सबै सोच्न एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो. यो अनन्त जीवन खुला परमेश्वरको भरोसा र विश्वास उहाँको राम्रो समाचार गर्नेहरूलाई दिनुभएको छ धर्मशास्त्र स्पष्ट छ, र बस न्याय उहाँलाई इन्कार गर्नेहरूलाई मा बाहिर छ. तर परमेश्वरले अस्वीकार गर्न एक भन्दा बढी तरिका छैन. यहाँ तीन म नयाँ नियममा पाइने कि. 1. येशूले तिनी कसले भन्यो छ कि इन्कार "यो झूटो हुनुहुन्छ तर येशूलाई ख्रीष्ट हुनुहुन्छ इनकार गर्ने? त्यो एटिक्राईष्ट छ, उहाँले पिता र पुत्र जो इनकार. पुत्र इनकार गर्ने कुनै एक पिता छ. जसले पुत्र confesses पनि पिता छ।" 1 यूहन्ना 2:22-23 त्यहाँ आध्यात्मिक वा धार्मिक रूपमा आफूलाई विचार जो आज हाम्रो संसारमा धेरै मान्छे छन्. तिनीहरूले परमेश्वरको अवस्थित भनेर विश्वास, र तिनीहरूले आफ्नै तरिकामा उहाँको उपासना गर्न प्रयास. शायद उनि पनि एक महान् शिक्षक वा परमेश्वरको अगमवक्ताको रूपमा येशूले हेर्न. तर तिनीहरूले येशूको छ भन्ने विश्वास गर्छन् भने जसले उहाँ भने, तिनीहरूले उहाँलाई इन्कार गर्दै. ठूलो रूपमा केवल येशूले देखेर ...
मसीहीहरूको लागि, प्रश्न छ छैन हामी प्रलोभनको सामना गर्नेछ वा छैन, तर हामी प्रतिक्रिया हामी कसरी त्यसो गर्दा गर्नेछ. लूका मा 4:1-2, हामी येशूको प्रलोभनमा पढ्न र उहाँले कस्तो प्रतिक्रिया. यहाँ म केही महिना पछि मेरो चर्च त्यो खण्डमा मा प्रचार छोटो प्रवचन देखि अडियो छ. म येशूको प्रलोभनमा हेर्न चाहन्थे, उहाँको आज्ञाकारी मनन, र हामी यो दृश्य सिक्न सक्छौं के सोच्न. हामी परीक्षाको समयमा सम्झनुपर्छ कुराहरू के-के हुन्? यहाँ मुख्य बुँदाहरू छन्: म. भगवान अनुमति दिन्छ र उहाँको योजना द्वितीय को भाग रूपमा प्रलोभनमा प्रयोग गर्छ. कमजोरी प्रलोभनको III गर्न मा दिन बहाना छैन. को Tempter पहिले नै पराजित भएको छ BragOnMyLord द्वारा येशूको प्रलोभनमा म तपाईंलाई एउटा प्रोत्साहन छ प्रार्थना
कसरी परमेश्वरको दृष्टि मा हामी धर्मी छौं? यो ख्रीष्टको पापी थियो जसमा एउटै आदर मा assuredly छ. उहाँले एक तरिका हाम्रो ठाउँमा ग्रहण लागि, उहाँले हाम्रो कोठा मा एक आपराधिक हुन सक्छ, र पापीको रूपमा साथ सम्हाल्न सक्छ, आफ्नै अपराध लागि, तर अरूको ती लागि, रूपमा धैरै उहाँ शुद्ध र छूट हरेक दोष थियो, र हामीलाई कारण थियो कि सजाय सहन सक्छ- आफूलाई छैन. यो नै तरिका छ, assuredly, हामी अब उसलाई धर्मी हुनुहुन्छ भनेर- हाम्रो आफ्नै काम गरेर परमेश्वरको न्याय गर्न हाम्रो सन्तुष्टि प्रदान को आदर मा, तर किनभने हामी ख्रीष्टको धार्मिकताको जडान मा न्याय छन्, जुन हामीले विश्वास द्वारा धारण गरेका, यो हाम्रो बन्न सक्छ. जन केल्विन पढ्नुहोस् बिस्तारै यो र यो डुब्नु गरौं! मेरो सन्देश लागि तयार गर्दा म यो उद्धरण मार्फत आए2कोरिन्थी 5:18-21 परिसर आउटरीच राष्ट्रीय सम्मेलन लागि. राम्रो सामान
म यसलाई लिन, त्यसपछि, येशूले त्यस unbelief (नहीं येशूमा विश्वास) अन्य कुरामा सन्तुष्टि खोज्न क्रममा येशूले एक दूर मोड़ गर्न. र येशूमा विश्वास हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो longings को सन्तुष्टि लागि येशूलाई आउँदै छ. विश्वास टाउको मा तथ्य मुख्य रूप सम्झौतामा छ; यो मुख्य रूप जो येशू सन्तुष्टि लागि fastens हृदयमा एउटा भोक छ. [येशू भन्नुहुन्छ,] 'जसले मलाई आउँछ भोक छैन र मलाई विश्वास गर्ने उहाँले तिर्खा कहिल्यै हुनेछ!'जन Piper
बारेमा एक महिना पहिले म त जवान विवाह किन मान्छे बताउन ब्लग लेखे. म गहिरो यो पढ्ने सबै प्रतिक्रियाहरू द्वारा प्रोत्साहन थियो र मेरो प्रार्थना प्रभु हामीलाई विवाहबारे थप biblically सोच्न मदत गर्ने भएको छ. तपाईं पढ्न प्राप्त गरे भने कि मूल पोस्ट यहाँ यो जाँच: म किन विवाहित त्यसैले युवा प्राप्त गर्नुभयो? यति धेरै मान्छे मलाई पुग्यो र तिनीहरूलाई लागि थियो कसरी उपयोगी मलाई भन्नुभयो राम्रो पछि, म यो मेरो पत्नी दिनु जस्तै उपयोगी हुनेछ लाग्यो, जेसिका, उनको दृष्टिकोण देखि नै प्रश्नको जवाफ. त्यसैले यहाँ यो छ. के गरे मेरो पत्नी निर्णय त जवान विवाह गर्न? उनी भन्छिन् ... 1. म पहिलो यात्रा भेट्दा म ईश्वरीय मानिस फेला, म कुनै पनि बेला चाँडै विवाह रही मा योजना थिएन. तर पहिलो समय देखि हामी बाहिर गए, म त्यहाँ केही फरक उहाँलाई थियो थाह थियो. उहाँले म एक मान्छे मेरो उमेर पहिले देखेका कहिल्यै थियो तरिकामा सुसमाचारको बारेमा भावुक थियो. म पनि कहिल्यै डेटिङ मा यस्तो बुद्धिमानी दृष्टिकोण कसैले भेट. कलेज अघि आफ्नो चेला धन्यवाद उहाँले लाग्यो ठ्याक्कै थाह ...
यहाँ म स्यान डिएगो यो वर्ष पहिले प्रचार एक प्रवचन केही भिडियो. यो सम्मेलन को विषय "चालित थियो", त्यसैले म रोमी मा प्रचार गर्ने छनौट 12:1-2. यो एक विश्वासीले "संचालित हुन लागि कस्तो खोज्दैन?" मेरो मुख्य बुँदाहरू विश्वासीले गर्नुपर्छ भनेर थिए ... 1. दया संचालित हुन 2. उपासना चालित हुन 3. कायापलट यसको उपयोगी आशा!
म भन्न हामी अफ्रीका को ठूलो महाद्वीप मा भ्रमण हुँदा हाम्रो लागि प्रार्थना गर्ने सबैलाई धन्यवाद चाहनुहुन्छ. प्रभु graciously ती प्रार्थनाको धेरै जवाफ, र छ विभिन्न देशहरूमा असर गर्न हामीलाई साथ तपाईंले प्रयोग. भ्रमण अब अन्त भएको छ र हामी घर राती लाग्यौं छन्. हामी सुरक्षित यात्रा को लागि र स्वास्थ्य को लागि आफ्नो जारी प्रार्थना मूल्यांकन चाहन्छु. हामी केही पनि राम्रो महसुस भएको छैन र हामी यसलाई घर स्वस्थ बनाउन चाहनुहुन्छ. म हाम्रो यात्रा बारेमा सबै बताउन ब्लग पोस्ट गर्न तत्पर. त्यतिन्जेल हामी आफ्नो प्रार्थनाको कदर
अहिले यो छ 12:34 बोट्सवाना छु. यो अफ्रीका मा हाम्रो पहिलो पूर्ण दिनको र प्रभु काम पहिले देखि नै छ. सारा पहुंच चालक अन्तिम रात जोहानसबर्ग उतरा र यो बिहान बोट्सवाना गर्न उड्यो. हामी समर्थकहरूको टन एक साइनिङ हामी एक स्थानीय मसीही पुस्तक पसल मा गरे यो दिउँसो पूरा गर्न पाए र हामीले केही ठूलो साक्षात्कार थियो. भोलि साँझ भ्रमण को पहिलो कन्सर्ट हो र हामी amped छन्. हामी साँच्चै यो भ्रमण फलदायी हुन चाहनुहुन्छ र हामी आफ्नो मद्दत प्रेम. तपाईं कसरी मदत गर्न सक्छ? तपाईं पनि प्रार्थना गरेर हामीलाई मदत गर्नुपर्छ, भनेर धेरै आशिष लागि हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद दिन हुनेछ धेरै प्रार्थना हामीलाई प्रदान.2कोरिन्थी 1:11 हामी दृढ प्रभु उहाँको योजना पूरा गर्न आफ्ना जनहरूको प्रार्थना प्रयोग विश्वास. त्यसैले तपाईं हामीलाई प्रार्थना गरेर मदत गर्न सक्छ. यहाँ तपाईँले हाम्रो लागि र हामीलाई प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ केही आधारभूत तरिकाहरू छन्: 1. त्यो प्रभु हामीलाई स्वस्थ र बलियो राख्न थियो 2. हामी आफूलाई सेवकको रूपमा मुद्रा भनेर 3. त्यो संगीत राम्रो जाने 4. हामी टाढा हुँदा प्रभु त्यो हाम्रो परिवार रक्षा हुनेछ 5. त्यो ख्रीष्टको हुनेछ ...
यो सेप्टेम्बर हामी छोटो फिल्म र एल्बममा भनिन्छ जारी “मानिस माथि" जवान मानिसहरू मानिसहरू हुन चुनौती. यहाँ को लागि एक संगीत भिडियो “मानिस माथि गान।" तपाईं यहाँ छोटो फिल्म र एल्बम खरिद गर्न सक्नुहुन्छ
यहाँ म विश्वासी इंजीलवाद बारेमा यो वर्ष पहिले सिकाउनुभयो सत्र देखि अडियो छ. BragOnMyLord द्वारा विश्वासी इंजीलवादी समय छोटो ती लागि, यहाँ अंक को सारांश:5एक विश्वासी इंजीलवादी को विशेषताहरु ... 1. गले र सुसमाचारको बुझ्नुहुन्छ 2. विश्वस्त र सुसमाचारको को Unashamed 3. हराएको प्रेम 4. परमेश्वरको निर्भर परिणाम लागि 5. साझेदारी गर्नुहोस् हराएको र अवसर लागि प्रार्थना गर्न यो उपयोगी आशा
कहिल्यै मेरो गीत "चढाइ भिडियो देखेका छौँ जसले तपाईंलाई ती लागि (नायक)" यहाँ छ. आनन्द लिनुहोस्! मलाई आशा छ यो आफ्नो आँखा ख्रीष्टमा राख्न तपाईं मद्दत गर्छ.
हिजो म केही कुराहरू समातेर गर्न स्टोरमा लेट रात स्टप गरे र म कोषाध्यक्ष संग एउटा एकदमै रोचक कुराकानी भएको थियो. त्यो मेरो वस्तुहरू स्क्यान रूपमा हामी साना कुरा गरे, र त्यसपछि उनले मलाई छुट कार्ड प्रस्ताव तर म मेरो पत्नी पहिले नै एक थियो तिनलाई भन्नुभयो. कुराकानीमा मजा पायो त्यही छ. म यसलाई धेरै पटक अघि थियो गर्नुभएको किनभने म यो कुराकानी सबै पनि राम्ररी थाह छ. यो ... व्यक्ति जस्तै केहि जान्छ: के!? तपाईं विवाहित हुनुहुन्छ? मलाई: हाँ म दुई र आधा अचम्मको वर्ष विवाह गरिएको छ. व्यक्ति: तिम्रो उमेर कति हो? तपाईं एक बच्चा जस्तो. मलाई: म बीस तीन छु. व्यक्ति: तपाईं त जवान हुनुहुन्छ! किन संसारमा के तपाईं त्यसो हुनेछ? मलाई: किन म नहीं? मा 2009, म एक्काइस वर्षको को बल्लतल्ल कानुनी र बल्लतल्ल जी वर्षको उमेरमा विवाह. मेरो विवाहपूर्वको समयमा, मंगनी, र छोटो विवाह, म प्रश्न जस्तै समय र समय फेरि सोधे गरिएको छ, "किन यति सानो विवाह? यो भीड के?", र मेरो व्यक्तिगत मनपर्ने, "तपाईं पर्खेको र आफ्नो जीवन पाएका छन् गर्नुपर्छ!" यी प्रश्न को मान्छे को केही अपरिचित थिए, तर केही परिवार थिए. म "यस्तो जवान मा विवाह भएको थियो पागल प्राप्त" उमेर?...
अब त्यसपछि हरेक म पछाडि जानुहोस् र एल्बम र मलाई साँच्चै Artistically सारियो र आध्यात्मिक जब म तिनीहरूलाई सुनेको गीतहरू सुन्न. ती एल्बम को एक Shai लिन्ने द्वारा Solus Christus परियोजना छ. यो मेरो मनपर्ने हिप हप एल्बम को छ- अवधि. उत्पादन अद्वितीय छ (हुनत commerical छैन), सामग्री अविश्वसनीय छ, र Shai गरेको गेय कौशल पूर्ण प्रदर्शनमा छ. यो बनाउँछ कि भन्ने एल्बम को छ Rappers आफूलाई यस्तो प्रश्न, "म किन अझै पनि फेरि rapping छु?" म यो पोस्ट मा सम्पूर्ण रेकर्ड उद्धृत गर्न सक्दैन, तर यहाँ एल्बम मेरो मनपर्ने पदहरू एक हो. यसलाई "माइक जाँच देखि shai गरेको पद हो 1,2": उहाँ आफ्ना जीवन फिरौती रूपमा दिए, म प्रचार छु र ख्रीष्टको मेरो anthems reciting जब म नाच छु, मेरो लालटिन अरू कसले तर राष्ट्रका प्रभु रोशनी गर्ने धर्मी थुमा आत्म-महिमामय को पनि एक शब्द बिना लेख्न एक heathen drunkard प्रचार गर्न सक्दैन? मेरो कमजोर शब्दहरू- बाह्र वर्षको उमेरमा चमत्कारी कामहरू गर्न किस्मत को बेदाग बीउ वर्णन गर्न साँच्चै अयोग्य, उहाँले उहाँको अंतर्दृष्टि छक्क पुरानो टाउको उहाँको आमाबाबुले पालन थियो, तापनि उहाँले आफ्नो हावा पाइप साँचो विसंगति सिर्जना- र दासले जो चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ ...
Trevin मैन देखि उत्कृष्ट पोस्ट. हामी सबै यो दयालु सिक्न सक्छौं, बाइबलीय, दयालु दृष्टिकोण http://bit.ly/oWNTno
सप्ताह को एक जोडी पहिले म एलएएक्स देखि बन्द गरे र मेरो मनपर्ने मान्छे केही दुनिया को अन्य पक्ष गर्न लाग्यौं. Tedashii, प्रो, KB, Thi'sl, डीजे PDogg, हाम्रो भ्रमण प्रबन्धक Steadman, र म येशूको सेवा गर्न अष्ट्रेलिया लाग्यौं थिए. के हामी गरे हामी ब्रिस्बेन मार्फत यात्रा अन्तर्गत दुई हप्ता तल खर्च, मेलबोर्न, पर्थ, र सिडनी. यो शहर प्रत्येक हामी ठूलो संगीत देखि लिएर भाग थिए 5,000-10,000 युवा. यो संगीत अघि, हामी केही विद्यालय गए र शो तिनीहरूलाई बाहिर निमन्त्रणा. के हामी स्कूल को धेरै मा भन्न अनुमति थिए सीमित थियो (किनभने तिनीहरूले गैर-मसीही राज्य विद्यालय थिए), तर हामी विद्यार्थीहरू प्रोत्साहन र ख्रीष्टको तिनीहरूलाई दर्शाउन हाम्रो सबै भन्दा राम्रो गरे. को संगीत मा, हामी सबै पाँच एक राउडी रूपमा चरण मारा, unashamed चालक. हामीलाई उत्प्रेरित गर्छ कि सुसमाचार हामी के के गर्न बारेमा सकेसम्म स्पष्ट हुन प्रयास गर्दा हामी हाम्रो क्षमता को सबै भन्दा राम्रो गर्न ती चरणमा हलचल मच्चाएका. केहि भन्दा बढी हामी येशूको जान्न मान्छे चाहन्थे! हामी सधैं निश्चित मान्छे प्रभावित छोड्न बनाउन प्रयास, हाम्रो कौशल द्वारा, तर हाम्रा प्रभु द्वारा. के हामी गर्न पायो अनुभव ...
एरिक मेसन हाल सुसमाचारको गठबन्धन भिडियो, Lecrae, र मलाई कालो मान्छे छलफल र “सुधार" धर्मशास्त्र